Ikpe – 2azụ
Home / Bible / Old Testament / Ikpe
1:1 Mgbe ọnwụ nke Joshua, ụmụ Izrel gakwuuru Jehova, si, "Ònye ga-arịgo anyị n'ihu, megide ndi Kenean, na onye ga-abụ onyeisi ndị agha?"
1:2 Jehova we: "Juda ga-agbago. Le, Enyewom ala n'ime aka ya. "
1:3 Juda we si nne-ya Simeon, "Gaa na m m ọtụtụ, buso ndi Kenean, nke mere na m nwekwara ike pua na ị gị ukwuu. "Ma Simeon we so ya.
1:4 Juda we elu, Jehova we nye ndi Kenean, nakwa dị ka ndi-Perizait, n'aka ha. Ha wee gbuo puku mmadụ iri n'ime ndị ikom na na Bezek.
1:5 Na ha hụrụ Adonibezek na Bezek, na ha buso ya, na ha gburu ndị Kenean na ndi-Perizait.
1:6 Mgbe ahụ Adonibezek ọsọ. Ha we chua ya, were ya, Ha we bipu nsọtụ ya aka na ụkwụ.
1:7 Na Adonibezek kwuru: "Iri Asaa eze, na na nsọtụ nke aka-ha na ukwu-bepụ, e achịkọta remnants nke ihe n'okpuru table nkem. Dị nnọọ ka m mere, ka Chineke kwụọ ụgwọ m. "Ha we bute ya na Jerusalem, ọ nwua n'ebe ahu.
1:8 Ụmụ Juda, nọchibidoro Jerusalem, jide ya. Ha wee tie ya ọnu mma-agha, anapụta obodo ahụ dum ga-akpọ.
1:9 emesia, agbadata, ha buso ndi Kenean ndi bi na ugwu, na n'ebe ndịda, na na mbara ọzara.
1:10 na Juda, ga-esi megide ndi Kenean ndi bi na Hebron, (aha nke si n'oge ochie bu Kiriat-aba) gbuo Sheshai, na Ahiman, na Talmai.
1:11 Na aka iso si n'ebe, ọ gara bi na Debia, ochie aha nke nke bu Kiriat-sefa, nke ahụ bụ, na City of Letters.
1:12 Keleb we si, "Onye ọ bụla ga-egbu Kiriat-sefa, na ga-ebikwasị n'efu ka ya, M ga-enye ya nwa m nwaanyị Aksa dị ka nwunye. "
1:13 Na mgbe Ọtniel, nwa Kenaz, a tọrọ nwanne Keleb, jide ya, o nyere ya Aksa, bú nwa ya na nwunye.
1:14 Na dị ka ọ na-eme njem na njem, ya na di ya dụrụ ọdụ ya, nke mere na ọ ga-rịọ a ubi n'aka nna-ya. Ma ebe ọ bụ na o zere ume mgbe ọ nọ ọdụ na ya inyinya-ibu, Keleb we si ya, "Kedu ihe ọ bụ?"
1:15 Ma ọ zara: "Nye a ngọzi m. N'ihi na i nyere m a n'ala akọrọ. Ọzọkwa nye a mmiri ala. "Ya mere,, Keleb we nye ya elu mmiri ala na ala mmiri ala.
1:16 Ụmụ onye-Kenait, ndị ikwu nke Moses, rigoro si n'obodo nkwu, na ụmụ Juda, n'ala ịkpa nke ya ọtụtụ, nke bụ n'ebe ndịda nke Arad. Ha we biri na ya.
1:17 Juda wee si ya na nwanne ya Simeon, na ọnụ ha mere ka ndị Kenan, ndị bi na Zefat, na ha ka ha nwua. Na aha obodo a na-akpọ Họma, nke ahụ bụ, Anathema.
1:18 Na Juda jide Geza, na ya n'akụkụ, na Ashkelon nakwa dị ka Ekron, na ha n'ókè-ala.
1:19 Jehova we Juda, na o nwere ugwu. Ma, ọ bụghị ike na-ehichapụ ihe ndị bi na ndagwurugwu. N'ihi na ha jupụtara na ụgbọ burugodị na scythes.
1:20 Na dị nnọọ ka Mozis kwuru, ha we nye Keleb Hebron, bibiri si na ya na umu-ndikom atọ nke Anak.
1:21 Ma ụmụ Benjamin hichapụ ndi Jebus bi Jerusalem. Na ndi Jebus ebiwo na ụmụ Benjamin bi na Jerusalem, ọbụna ruo ugbu a.
1:22 Ulo Josef nwekwara rigoro imegide Bethel, na na Jehova nọyere ha.
1:23 N'ihi na mgbe ha nọchibidoro obodo, nke e mbụ na-akpọ Luz,
1:24 ha hụrụ otu nwoke na-apụ apụ si n'obodo, na ha sịrị ya, "Ikpughe anyị n'ọnụ ụzọ obodo, na anyị ga na-eme ebere n'ebe unu nọ. "
1:25 Na mgbe o kpughere ha ya, ha mere ka ndị obodo na ọnu mma-agha. Ma nwoke, na ndị ikwu ya nile, ha wepụtara.
1:26 Na ebe a chụpụrụ, ọ pua na ala ndi Het, o wue obodo e, o wee kpọọ ya Luz. N'ihi ya, ọ na-akpọ, ọbụna ruo ugbu a.
1:27 N'otu aka ahụ, Manasseh ebibighị Bet na Teanak, na obodo ntà ha, na ndi bi na Doa na umu Ibleam na Megido, na obodo ntà ha. Na ndi Kenean malitere ibi na ha.
1:28 Mgbe ahụ, mgbe Israel ghọrọ ndị dị ike, o mere ha tributaries, ma ọ bụ na-adịghị njikere ibibi ha.
1:29 Na ugbu a Ephraim emeghị egbu ndi Kenean, onye bi Gezea; kama, o biri ndụ na ya.
1:30 Zebulun emeghị-ehichapụkwa anya mmiri bi Kitron na nke Nahalal. Kama, ndi Kenean we biri n'etiti ha, we ghọrọ ha tributary.
1:31 N'otu aka ahụ, Asha ebibighị ndi bi n'Ako na Saịdọn, Ahlab na Akzib, na Helbah, na Aphik, na Rehob.
1:32 Ọ we biri n'etiti ndi Kenean, ndị bi n'ala, ọ bụghị ka ha nwua.
1:33 Naftali nwekwara adịghị hichapụ ndi bi na Bet-shemesh na Bethanath. Ọ we biri n'etiti ndi Kenean bi n'ala. Na Bet-shemeshites na Bethanathites ndị tributaries ya.
1:34 Na ndi-Amorait hemmed n'ime ụmụ Dan n'ugwu, na-enyeghị ha ebe, ka ha wee na-agbadata na flatlands.
1:35 Na na o biri ugwu n'ebe har-heres, nke a sụgharịrị ka 'yiri brick,'Na na Ajalon na Sha-alabbin. Ma aka ulo Josef dị nnọọ ukwuu, o wee a tributary ya.
1:36 Ugbu a ókè-ala ndi-Amorait we site na nrigo nke akpi, na Rock na elu ebe.
2:1 Na ihe mmụọ ozi Jehova we si na Gilgal na Place ákwá nke, o wee sị: "M mere gị pụọ Egypt, na m mere gị n'ala, banyere nke m ṅụụrụ nna nna gị hà. M kwere nkwa na m ga-ya ghara ịdị irè ọgbụgba ndụ m na ị, ọbụna ruo mgbe ebighị ebi:
2:2 naanị ma ọ bụrụ na ị ga-etolite a mmeko na ndị bi n'ala a. Kama, ị kwesịrị ị na tugharia ebe ịchụàjà ha. Ma unu achọghị ige ntị n'olu m. Gini mere i meworo nke a?
2:3 N'ihi nke a, M na-adịghị njikere ibibi ha n'ihu gị, nke mere na ị nwere ike na-iro, na nke mere na ha na chi nwere ike ịbụ gị n'iyi. "
2:4 Ma mgbe mmụọ ozi Jehova gwara okwu ndị a niile bụ ụmụ nke Israel, ha we welie olu-ha, na ha na-akwa ákwá.
2:5 Na aha ebe a na-akpọ, Ebe ákwá nke, ma ọ bụ ndị Ebe Anya mmiri. Ha immolated metụtara Onyenwe anyị na ebe.
2:6 Jọshụa asuan ndị mmadụ, na ụmụ Israel we je, onye nke ọ bụla n'ihe nketa ya, ka ha wee nweta ya.
2:7 Ha we fè Jehova, n'oge n'ụbọchị ya niile, na n'oge ubọchi nile nke ndi-okenye, ndị ndụ ogologo oge mgbe ya, na ndi mara niile ọrụ nile nke Jehova, nke O mere Israel.
2:8 Jọshụa, nwa Nun, ndị ohu Jehova, nwụrụ, dị otu narị na iri afọ.
2:9 Ha we lìe ya na akụkụ nke-onwunwe-ya na Timnat-sera, na n'ugwu Efraim, n'ihu n'ebe ugwu nke Ugwu Gaash.
2:10 Na na ọgbọ dum gbakọkwara nna-ha. Na biliri ọzọ, ndị na-amaghị Chineke na ọrụ nke o mere maka Israel.
2:11 Ụmụ Israel me ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, ha we fè Bealim.
2:12 Na ha hapụrụ Jehova, Chineke nke nna-ha, onye duru ha si n'ala Ijipt. Ha we so chi ndị mba ọzọ na chi nile nke ndị dị iche iche, ndị bi ha gburugburu, na ha adored ha. Na ha kpasuru Jehova iwe,
2:13 ịdị na-ahapụ ya, na-eje ozi Baal na Ashtarot.
2:14 Ma Jehova, ọ na-ewe iwe megide Israel, nye ha n'aka ndị na-akwakọrọ ihe, onye jide ha na-eresị ha ka ndi-iro na-ebi n'akụkụ niile. Ma ha si nwee ike idi ihe na-emegide ha.
2:15 Kama, n'ebe ọ bụla ha chọrọ ịga, na aka Jehova dị n'ahụ ha, dị nnọọ ka o kwuru na dị nnọọ ka ọ ṅụụrụ ha. Na ha na-ukwuu n'ala.
2:16 Ma Jehova kpọlite ​​ndị ikpe, bụ ndị ga-anapụta ha n'aka ndị aka nke na-emegbu ha. Ma ha na-adịghị njikere ige ha ntị.
2:17 Fornicating na chi ọzọ na adoring ha, ha ngwa ngwa gbahapụrụ ụzọ tinyere nke ndị nna ha merela agadi. Na ọ nụrụ na Jehova nyere n'iwu, ha mere ihe niile Kama.
2:18 Ma mgbe Chineke nọ na-azụ elu ndị ikpe, na ubọchi-ha, a kpaliri ya ime ebere, na o gere ntị ịsụ ude nke ndị nọ n'ahụhụ, o tọhapụrụ ha si n'igbu-emegbu ha.
2:19 Ma mgbe a ikpe ama akpa, ha we laghachi, na ha na-eme ọtụtụ ihe ka njọ ihe karịa nna-ha mere, esonụ chi ala ọzọ nile, na-eje ozi ha, na adoring ha. Ha ahapụghị ha nchụso na ha nnọọ isi ike n'ụzọ, site nke ha na-agba nkịtị na-eje ije.
2:20 Na iwe nke Jehova we iwe megide Israel, o wee sị: "N'ihi na ndị a mere adabaghi ​​ọgbụgba ndụ m, nke m kpụrụ na nna-ha, na ha na-eleda anya na-ege ntị n'olu m.
2:21 Ya mere, M'gaghi-ebibi mba na Joshua hapụrụ mgbe ọ nwụrụ,,
2:22 ka ọ were, site ha, M nwere ike ịnwale Israel, ka ma ma ọ bụ ha ga na-ahụ Ụzọ Jehova, na-eje ije na ya, dị nnọọ ka ndị nna ha debere ya. "
2:23 Ya mere, Jehova hapụrụ mba ndia nile, na ọ bụ adịghị njikere ngwa ngwa ha daa, ọ dịghịkwa ya anapụta ha n'aka ndị Joshua.
3:1 Ndị a bụ mba nke Jehova ekpe, nke mere na ha o wee kụziere Israel na niile ndị na-amaghị na agha nke ndi Kenean,
3:2 nke mere na e mesịa, ha na ụmụ ha wee mụta ịlụso ndị iro ha, na inwe a njikere ime agha:
3:3 ise isi ndi Filistia, na ndi Kenean nile, na ndị Saịdọn, na ndi-Haivait ndi bi n'ugwu Lebanon, si n'Ugwu Beal-heamon rue nbata Hemat.
3:4 O we rapu ha, nke mere na ha o wee nwalee Israel, ka ma ma ọ bụ na ha ga-ege ntị na Jehova nyere n'iwu, nke ọ gwara ndị nna nna ha site n'aka Moses.
3:5 Ya mere, ụmụ Izrel biri n'etiti ndi Kenean, na ndi Het, na ndi-Amorait, na ndi-Perizait, na ndi-Haivait, na ndi Jebus.
3:6 Ha we were umu-ha ndinyom ka nwunye, na ha nyere ha onwe ha ndị inyom ka ha na ụmụ ha, ha we fè chi nile ha.
3:7 Ha we me ihe ọjọ n'anya Jehova, na ha chefuru Chineke ha, mgbe na-eje ozi Bealim na Ashtarot.
3:8 Ma Jehova, ọ na-ewe iwe na Israel, nye ha n'aka ndị Cushan-Rishathaim, eze Mesopotamia, ha we fè ya kemgbe afọ asatọ.
3:9 Na ha kpọkuru Chineke, onye wee nye ha onye nzọpụta, o tọhapụrụ ha, ya bụ, Ọtniel, nwa Kenaz, a tọrọ nwanne Keleb.
3:10 Na Mọ nke Jehova dị n'ime ya, o we kpe Israel. Ọ pua na-alụ ọgụ, Jehova we nye Cushan-Rishathaim, eze Siria, o riri ya.
3:11 Na ala di jū ọgu arọ abua. Ọtniel, nwa Kenaz, nwụrụ.
3:12 Ụmụ Israel maliteghachiri-eme ihe ọjọọ n'anya Jehova, onye Eglon, eze Moab, megide ha n'ihi na ha mere ihe jọrọ njọ n'anya-ya.
3:13 Ọ jikọtara ya na ya umu Amon na ụmụ Amalek. O we pua, tie Israel, na o nwere n'obodo nkwu.
3:14 Ụmụ Israel jere ozi Eglon, eze Moab, maka arọ iri na asatọ.
3:15 emesia, ha tikuru Chineke, onye wee nye ha onye nzọpụta, akpọ Ihud, nwa Gira, nwa Benjamin, onye na-eji ma aka nakwa dị ka aka-nri-. Ụmụ Izrel wee zigara onyinye Eglon, eze Moab, site ya.
3:16 O mere onwe-ya a mma agha ihu abụọ, enwe a handle, eru n'etiti, na ogologo nke n'ọbụ aka a n'aka. Na o kere n'úkwù na ya n'okpuru ya ezo, na nri apata ụkwụ.
3:17 O nyere onyinye ndia Eglon, eze Moab. Ugbu a Eglon nke ukwuu abụba.
3:18 Na mgbe ọ ọkọnọ onyinye ya, na o soro ya enyi, Ọ bịara na ya.
3:19 Ọzọkwa, alọta Gilgal ebe arusi bu, ọ we si eze, "Dị ihe nzuzo m unu okwu na, O eze. "O wee nye nkịtị. Na mgbe ndị niile na-gburugburu ya ahụ hapụrụ,
3:20 Ihud banyere ya. Ugbu a ọ nọ ọdụ naanị na a n'oge okpomọkụ ụlọ elu. O wee sị, "M nwere a okwu site na Chineke unu." Ozugbo o biliri si n'oche-eze.
3:21 Na Ihud akp ya ​​aka ekpe, o we were daga si nri ya n'apata-ukwu aka. Ọ jụrụ ya n'ime ya afo
3:22 otú ike na handle soro agụba n'ime ọnya, na e nchọ site oké ego nke abụba. Ma otú o ịdọrọ na mma-agha. Kama, ọ hapụrụ ya na ahụ dị nnọọ ka o gbuo ya. Ozugbo, site onwe akụkụ nke ọdịdị, unyi nke ngiri-afọ-pua.
3:23 Mgbe ahụ Ihud nlezianya mechie ọnụ ụzọ nke ọnụ ụlọ dị n'elu. Na ichebe ndị Ogwe,
3:24 o we la site a azụ ụzọ ọpụpụ. Na-ejere eze, abanye, hụrụ na ọnụ ụzọ nke ọnụ ụlọ dị n'elu na-emechi, ha we si, "Ikekwe, ọ na-nsị ya ngiri-afọ ke ndaeyo ụlọ."
3:25 Na mgbe na-eche a ogologo oge, ruo mgbe ha bụ ndị ihere, na ịhụ na ọ dịghị onye meghere ụzọ, ha wee were mkpịsị ugodi, na imeghe ya, ha hụrụ onyenwe ha dina nwụrụ anwụ na ala.
3:26 ma Ihud, ka ha nọ n'ọgba aghara, wepuga onwe-ya na-agafe ebe nke arusi, ahụ o si laghachi. Na ọ bịarutere Seirath.
3:27 Na ozugbo ọ fùa opì-ike n'ugwu Efraim. Ụmụ Israel rịdata na ya, ya onwe ya na-aga n'ihu na n'ihu.
3:28 Na ọ sịrị ha: "Soro m. N'ihi na Jehova agbapụtawo ndị iro anyị, Moab, n'ime anyị aka. "Ma ha rịdata mgbe ya, na ha nwere ngabiga-miri Jọdan, nke agafe ka Moab. Na ha ekweghị ka onye ọ bụla ịgafe.
3:29 Ya mere, ha gburu ndị Moab n'oge ahụ, banyere iri puku, niile ike ma siri ike mmadụ. Ọ dịghị onye n'ime ha na-enwe ike ịgbapụ.
3:30 Na Moab e wedara n'ubọchi n'okpuru aka Israel. Na ala di jū ọgu arọ.
3:31 Mgbe ya, e Shamgar, nwa-anat, ònye gburu narị ndị ikom isii ndị Filistia na a mma ogè. O nwekwara gbachiteere Israel.
4:1 Ma mgbe ọnwụ nke Ihud, ụmụ Izrel maliteghachiri-eme ihe ọjọọ n'anya Jehova.
4:2 Jehova we nye ha n'aka Jebin, bú, bú eze Kenean, onye chịrị na Hezọ. Na o nwere a ọchịagha nke ndị agha ya aha ya bụ Sisera, ma nwoke a bi na Harosheth nke mba.
4:3 Ụmụ Israel tikuru Jehova. N'ihi na o nwere narị itoolu ụgbọ ịnyịnya scythes, o vehemently emegbu emegbu ha ruo iri afọ abụọ.
4:4 Ugbu a, e nwere a amụma, Deborah, nwunye Lappidoth, onye kpe ndi Israel ikpe na na oge.
4:5 Na ọ nọ ọdụ n'okpuru a nkwụ, nke a na-akpọ site aha ya, n'etiti Rema na Bet-el, na n'ugwu Efraim. Ụmụ Israel wee ruo ya nke ọ bụla ikpe.
4:6 O zìe kpọ Berak, nwa Abinoam, si Kedesh Naftali. O wee sị ya: "Chineke, Chineke nke Israel, akụziri gị: 'Gaa na-edu agha ka n'Ugwu Tebọ, na ị ga-ewere ya na ị na iri puku na-alụ ọgụ ndị si umu Naftali na ụmụ nke Zebulun.
4:7 Mgbe ahụ, m ga-eduga gị, n'ebe nke iyi Kaishon, Sisera, onye ndú nke ndị agha Jebin, na ụgbọ ịnyịnya ya na dum ìgwè. M ga-anapụta ha n'aka-unu. ' "
4:8 Berak we si ya: "Ọ bụrụ na ị ga-abịa na m, aga m agaba. Ọ bụrụ na ị na-adịghị njikere na-abịa na m, M ga-aga. "
4:9 O wee sị ya: "N'ezie, M ga-eso unu. Ma n'ihi mgbanwe a, mmeri ga-reputed gị. Ya mere Sisera ga-n'aka nke nwaanyị. "Ya mere,, Deborah bilie, na-aga na Berak Kedesh.
4:10 o, akpọ Zebulun na Naftali, rigo, ya na orú nnù ndikom agha, enwe Deborah na ụlọ ọrụ ya.
4:11 Ma Heba, onye-Kenait, mbụ napụrụ ike nke ndi-Kinait, ụmụnne ya, umu Hobab, ndị ikwu nke Moses. Na na ọ mara ulo-ya ulo-ikwū rue ndagwurugwu a na-akpọ Zaananim, nke dị nso Kedesh.
4:12 Na a kọọrọ Sisera na Berak, nwa Abinoam, rịgoro n'ugwu Teboa.
4:13 O we chikọta itoolu narị ụgbọ ịnyịnya na scythes, na ndị agha niile, si Harosheth nke ndị mba ọzọ ka iyi Kaishon.
4:14 Na Deborah si Berak: "Bilie. N'ihi na nke a bụ ụbọchị nke Jehova na-anapụta Sisera n'aka gị. N'ihi na ọ bụ gị onyeisi. "Ka, Berak sitere n'Ugwu Tebọ, na iri puku ndị agha na ya.
4:15 Ma Jehova gburu Sisera na oké egwu, na niile ụgbọ ịnyịnya ya na ndị niile ya na ìgwè na ọnu mma-agha, n'anya Berak, nke mere na Sisera, awụli elu si n'ụgbọ ịnyịnya ya, ọsọ ụkwụ.
4:16 Na Berak nāchu ndị na-agba ọsọ ịnyịnya, na ndị agha, dị nnọọ ka Harosheth nke mba. Na dum ìgwè ndị iro e gbuturu, si n'oké ebibi.
4:17 ma Sisera, mgbe na-agba ọsọ, rutere tent Jael, bú nwunye Heba, onye-Kenait. N'ihi na udo di n'etiti Jebin, eze Hezoa, na ulo Heba, bú, onye-Kenait.
4:18 Ya mere, Jael we pua izute Sisera, o wee sị ya: "Tinye m, nwem. Tinye, ị kwesịrị ị na-atụ egwu. "O wee banye ya tent, na ọ na e kpuchie ya na ákwà mgbokwasị,
4:19 O wee sị ya: "Nye m, Ana m arịọ gị, a obere mmiri. N'ihi na m na m nnọọ mmiri na-agụ. "+ O meghere a karama nke mmiri ara ehi, na ọ nyere ya ka na-aṅụ. Na ọ kpuchie ya.
4:20 Na Sisera we si ya: "Guzo tupu n'ọnụ ụzọ ụlọikwuu. Ma ọ bụrụ na onye ọ bụla abịarute, ajụjụ gị, na-asị, 'Ọ dị onye ọ bụla ebe a?'Ị ga-ikwu, 'Ọ dịghị onye.' "
4:21 Na Jael, bú nwunye Heba, were a ọgọ si tent, na kwa were a mallet. Na-abanye-adịghị ahụ anya na na-agbachi nkịtị, ọ enịm ọgọ n'elu ụlọ nsọ nke isi-ya. Na-egbu ya na mallet, ọ ụgbọala ya site na ụbụrụ ya, dị ka ala. Ya mere, isonyere oké ụra ọnwụ, ọ dara amaghị ihe ọ bụla na nwụrụ.
4:22 Ma, le, Berak rutere, na-achụ nke Sisera. na Jael, na-aga izute ya, sị ya, "Bịanụ, na m ga-egosi gị nwoke ahụ ị na-achọ. "Mgbe ọ banyere ya tent, ọ hụrụ Sisera atọgbọrọwo, na ọgọ ofu ya n'ụlọ arụsị.
4:23 Otú a ka Chineke umeala Jabin, bú eze Kenean, n'ụbọchị ahụ, n'ihu ụmụ Israel.
4:24 Ha na ụba ọ bụla ụbọchị. Na aka dị ike na ha akaghị Jabin, bú eze Kenean, ruo mgbe ha kpochapụrụ ya.
5:1 N'ụbọchị, Deborah na Berak, nwa Abinoam, bụọ abụ,, si:
5:2 "All ị nke Israel ndi ofufo gị ndụ ize ndụ, gọzie Jehova!
5:3 Listen, O eze! Tinye uche, O isi! Ọ bụ m, ọ bụ m, onye ga-abụ abụ na Jehova. M ga-abụ abụ a psalm Jehova, Chineke nke Israel!
5:4 O nwe-ayi, mgbe ị hapụrụ Sia, ị gafere site n'ógbè ndị Edom, na eluigwe na ụwa na a kpaliri, na igwe-oji Mmiri zoro ala mmiri.
5:5 Ugwu-asọpụta pụọ ​​n'ihu Jehova, na Sinai, n'iru Jehova, bú Chineke nke Israel.
5:6 Na ụbọchị nke Shamgar, nwa-anat, n'ụbọchị Jael, ụzọ dị nwayọọ. Na onye ọ bụla bata ha, aga ike ike byways.
5:7 The ike ikom kwụsịrị, na ha zuru ike na Israel, ruo mgbe Deborah bilie, ruo mgbe a na nne bilie Israel.
5:8 Jehova họọrọ ọhụrụ agha, ya onwe ya kagburu ọnụ ụzọ ámá nke ndị iro. A ọta na ube na-ahụbeghị n'etiti puku mmadụ iri anọ nke Israel.
5:9 My obi hụrụ ndị ndú nke Israel. Unu niile ndị na, nke gị onwe gị free uche, nyere onwe unu n'oge a nsogbu, gọzie Jehova.
5:10 Ị onye nọkwasị inyinya-ibu arụ, na unu ndị na-anọdụ ikpe, na ị na-eje ije n'ụzọ, ekwu okwu.
5:11 Ebe ụgbọ e gburu ọnụ, na ndị agha nke ndị iro e kpagbuo, na ebe, ka ndị ọkàikpe nke Jehova kọwara, ka ya clemency-abụ nke ndị dimkpa nke Israel. Mgbe ahụ ka ndị nke Jehova ịgbada ka ọnụ ụzọ ámá, na inweta ochichi.
5:12 Bilie, bilie, Deborah! Bilie, bilie, na-ekwu okwu a canticle! Bilie, Berak, jide unu dọọrọ n'agha, O nwa Abinoam.
5:13 The remnants nke ndị mmadụ na a zọpụtara. Jehova alụso ike.
5:14 Nke Ephraim, o bibiri ndị na Amalek, na mgbe ya, nke Benjamin, ndị gị na ndị mmadụ, The Amalek. site Makia, e rịdata isi, na site na Zebulun, ndị mere ndị agha agha.
5:15 The isi Isaka bu na Deborah, ha we so na nzọụkwụ nke Berak, onye nọ n'ihe ize ndụ ya onwe ya, dị ka otu oké headlong n'ime a ọdịiche. Reuben e kewara megide onwe-ya. Esemokwu chọtara n'etiti oké mkpụrụ obi.
5:16 Gịnị mere i ji na-ebi n'etiti abụọ ala, nke mere na ị na-anụ na eti nke ìgwè ewu na aturu? Reuben e kewara megide onwe-ya. Esemokwu chọtara n'etiti oké mkpụrụ obi.
5:17 Gilead we zuru ike n'ofè Jọdan, na Dan e biri na mmiri. Asha bi n'elu ájá nke oké osimiri, na bi na ọdụ ụgbọ mmiri.
5:18 Ma n'ezie, Zebulun na Naftali nyere ndụ ha ọnwụ n'ógbè Mirom.
5:19 Ndị eze bịara buso; ndi-eze Kenean agha na Teanak, n'akụkụ mmiri Megido. Ma ha na-adịghị kwatara.
5:20 The ọgụ megide ha bụ site n'eluigwe. The kpakpando, fọdụrụ ha iji na ọmụmụ, buso Sisera.
5:21 The iyi Kaịshọn dọkpụụrụ pụọ ozu ha, na onrushing torrent, iyi Kaịshọn. O mkpụrụ obi m, azọ ụkwụ n'elu siri ike!
5:22 The akpụkpọ ụkwụ nke inyinya etiwara, mgbe ike nke ndị iro gbara ọsọ pụọ na iwe, na bugara na n'iyi.
5:23 'Onye a bụrụ ọnụ ka ala Meroz!'Kwuru na mmụọ ozi Jehova. 'Onye anābu ọnu ka bi na ya! N'ihi na ha abiaghi enyemaka nke Jehova, na enyem-aka nke ya kasị bụrụ dike. '
5:24 Gọzie n'etiti ndị inyom bụ Jael, bú nwunye Heba onye-Kenait. Ma gọzie bụ ọ na ya n'ụlọikwuu.
5:25 Ọ rịọrọ ya maka mmiri, na ọ nyere ya mmiri ara ehi, na o nyere ya butter na a efere kwesịrị ekwesị n'ihi na ndi-isi.
5:26 Ọ na-etinye ya n'aka-ekpe ka ntu, na ya aka-nri Onye ọrụ nke mallet. O gburu Sisera, na-achọ na isi-ya a ebe ọnya, na ike ịkpọpu ya n'ụlọ arụsị.
5:27 N'agbata ụkwụ ya, ọ e bibiri ebibi. Ọ gwụrụ gabiga. Ọ curled elu tupu ya ụkwụ, o dina n'ebe na-adịghị ndụ na-ahụsi anya.
5:28 Nne ya na-elepụ anya site a window na iti mkpu arịrị. O kwuru si n'ọnụ ụlọ dị n'elu: 'Gịnị mere ụgbọ ịnyịnya ya na-egbu oge na-alọta? Mere ka ụkwụ nke otu ya ịnyịnya otú ngwa ngwa?'
5:29 Onye ahụ maara ihe karịa ndị ọzọ nke ndinyom-ya zara nne ya na-na-iwu na a:
5:30 'Ikekwe, ọ na-now nkerisi kwatara, na ihe ndị kasị mma n'etiti ndị inyom a na-ahọrọ maka ya. Uwe nke iche iche na agba na-anapụta Sisera ka kwatara, na dị iche iche na ibu na-na-anakọtara maka ịchọ mma nke n'olu. '
5:31 O nwe-ayi, otú ahụ nwere ike iro gị niile n'iyi! Ma nwere ike ndị hụrụ gị n'anya na-enwu na ịma mma, dị ka anyanwụ na-awa na ya na-ebili. "
5:32 Na ala zuru ike ruo afọ iri anọ.
6:1 Ụmụ Israel me ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, onye nye ha n'aka Midian ruo afọ asaa.
6:2 Na ha na-ukwuu na-emegbu emegbu ha. Na ha meere onwe ha n'oghere na n'ọgba ugwu, na nnọọ e wusiri ike ebe-agbachitere.
6:3 Na mgbe Israel kụrụ, Midian na Amalek, na ndi fọduru nke dị n'ebe ọwụwa anyanwụ mba nke rịgooro,
6:4 na bukwa ụzọ sụọ-ikwū-ha n'etiti ha, ha tọgbọrọ n'efu ka ihe nile a kụrụ, dị nnọọ ka ọnụ ụzọ Geza. Ha hapụrụ ihe ọ bụla iji na-azụ ndụ na Israel, abughi aturu, ma ọ bụ ehi, ma ọ bụ ịnyịnya ibu.
6:5 N'ihi na ha na ndị nile ha na atụrụ ha rutere na-ikwū-ha, na ha jupụtara niile n'ebe ndị dị ka igurube, ihe na ọlu di n'aru ìgwè mmadụ na kamel, agbalị ibibi ihe ọ bụla ha metụrụ.
6:6 Na Israel na-wedara ukwuu n'anya Midian.
6:7 O tikuru Jehova, arịọ aka izute Midian.
6:8 O we zigara ha otu nwoke a amụma, o wee sị: "Otú a ka Jehova, Chineke nke Israel: 'M mere ka ị agbago site Egypt, na m rara gị pụọ n'ụlọ n'agbụ.
6:9 Na m onwe unu n'aka ndi Ijipt na n'aka niile nke ndị iro na-emekpa gị ahụ. Na m na-achụpụ ha na mbata gị, na m napụtara ala ha ka ị.
6:10 M wee sị: Abụ m Jehova Chineke gị,. Ị agaghị atụ egwu chi nile nke ndi-Amorait, na ọ bụ ala ị na-ebi. Ma ị nọ na-adịghị njikere na-ege ntị n'olu m. ' "
6:11 Mgbe ahụ, otu mmụọ ozi Jehova bịara, O wee nọdụ n'okpuru osisi terebinth, nke di na Ophrah, na nke diri Joash, nna nke ndị ezinụlọ Ezri. Na mgbe nwa-ya Gideon e azọcha na nhicha ọka na mmanya, ka o wee na-agbapụkwa n'ebe Midian,
6:12 Mọ-ozi nke Jehova pụtara ìhè n'ihu ya, o wee sị: "Onyenwe anyị bụ na gị, kasị dike nke mmadụ. "
6:13 Gideon we si ya: "Ana m arịọ gị, nwem, ma ọ bụrụ na Jehova nọnyeere anyị, gịnị mere ihe ndị a mere ka anyị? Olee ebe ọrụ ebube ya, nke nna nna anyị hà kwuru na mgbe ha kwuru,, 'Jehova na-edu anyị n'ebe Egypt.' Ma ugbu a, Jehova agbahapụwo anyị, ọ napụtara anyị n'aka Midian. "
6:14 Ma Jehova na-elelị ya, o wee sị: "Gaa n'ebe a, ike gị, na ị ga-onwe Israel n'aka Midian. Mara na m zigara gị. "
6:15 Na-aza, o kwuru, sị: "Ana m arịọ gị, nwem, na ihe m ga-onwe Israel? Le, ezinụlọ m bụ ike na-ekweghị na Manase, na mụ onwe m bụ dịghị ihe ọzọ na ụlọ nna m. "
6:16 Na Onyenwe anyị gwara ya: "M ga-anọnyere gị. Ya mere, ị ga-egbutu Midian ka ọ bụrụ otu onye. "
6:17 O wee sị: "Ọ bụrụ na ahutawom amara n'iru unu, nye m a na-egosi na ọ bụ gị na-agwa m okwu.
6:18 Na ike gị esila si ebe a, ruo mgbe m laghachi ị, ebu a àjà na àjà ya unu. "O zara, "M ga-echere gị laghachi."
6:19 Na Gideon banyere, o sie a ewu, na o mere-ekoghị eko achịcha si a ọtụtụ nke ntụ ọka. Na mwube anụ na a nkata, na-etinye na efere nke anụ ahụ na a ite, O we nara ya niile n'okpuru osisi terebinth, na o nyere ya ya.
6:20 Mọ-ozi nke Jehova we si ya, "Were anụ ahụ na-ekoghị eko achịcha, na-edebe ha na na nkume, wụpụ efere n'elu ya. "Mgbe o mere otú,
6:21 Mọ-ozi nke Jehova akp ọgwụgwụ nke a mkpara, nke na o nwere n'aka-ya, na o metụrụ anụ ahụ na-ekoghị eko achịcha ahụ. Na a ọkụ rigoro si n'oké nkume, na na ọ gwusia anụ ahụ na-ekoghị eko achịcha ahụ. Mgbe ahụ mmụọ ozi Jehova pụrụ n'ahụ ya n'anya.
6:22 na Gideon, na-amara na ọ bụ mmụọ ozi Jehova, kwuru: "Ewoo, Onyenwe m na Chineke! N'ihi na ahụwo m ka Angel nke Jehova ihu na ihu. "
6:23 Na Onyenwe anyị gwara ya: "Udo dịrị gị. Atụla ụjọ; i gaghi-anwu. "
6:24 Ya mere, Gideon wuru ebe ịchụàjà nye Jehova e, o wee kpọọ ya, Udo nke Chineke, ọbụna ruo ugbu a. Na mgbe ọ ka na Ophrah, nke bụ nke ndị ezinụlọ Ezri,
6:25 na abalị, Jehova we si ya: "Were a ehi nke nna-gi, na ọzọ ehi nke afọ asaa, na ị ga-ebibi ebe ịchụàjà Bel, nke nna gị bụ. Na ị ga-egbutu ihe dị nsọ n'ọdọ nke bụ na gburugburu ebe ịchụàjà.
6:26 Na ị ga-ewuru ebe ịchụàjà Jehova bụ Chineke gị, na nzuko nke a nkume, na nke ị dọba àjà n'ihu. Ị ga-ewere nke abụọ ehi, na ị ga-achụ a ọku n'elu a ikpo nke osisi, nke ị ga gbutere Grove. "
6:27 Ya mere, Gideon, na-ewere ndị ikom iri si orù-ya, mee nnọọ dị ka Jehova nyere ya iwu ya. Ma na-atụ egwu ya na ezinụlọ nna ya, na ndị na obodo, ọ bụ adịghị njikere ime ya n'ehihie. Kama, ọ dechara ihe niile n'abalị.
6:28 Na mgbe ndị na obodo ebiliwo ụtụtụ, ha hụrụ ebe ịchụàjà Bel ebibi, na dị nsọ n'ọdọ egbutu, na nke abụọ ehi ka n'elu ebe ịchụàjà, nke ahụ e wuru.
6:29 Ha we sirita, "Ònye mere ihe a?"Ma mgbe ha jụrụ n'ebe nile ka na-ede akwụkwọ nke n'omume, a sịrị, "Gideon, nwa Joash, mere ihe a niile. "
6:30 Ha we si Joash: "Da na-atụ nwa gị ebe a, ka o wee nwụọ. N'ihi na ọ ebibi ebe ịchụàjà Bel, na ya, o gbutuwo dị nsọ n'ọdọ. "
6:31 Ma ọ zara ha: "Ị nwere ike ịbụ na-abọ ọbọ Beal, nke mere na ị na-alụ ọgụ ahụ n'ihu ya? Onye ọ bụla bụ onye iro ya, ka ya ịnwụ tupu ìhè abịarute echi; ma ọ bụrụ na chi ka ọ bu, ka ya inaputa onwe-ya imegide ya bụ onye kagburu ebe ịchụàjà ya. "
6:32 Site ụbọchị, Gideon a na-akpọ Jerubeal, n'ihi na Joash kwuru, "Ka Bel ọbọ onwe-ya imegide ya bụ onye kagburu ebe ịchụàjà ya."
6:33 Ya mere, niile nke Midian, na Amalek, na n'ebe ọwụwa anyanwụ iche iche zukọtara. Na-agafe Jọdan, ha ma ulo-ikwū-ha na ndagwurugwu Jezreel.
6:34 Ma Mọ nke Jehova banyere Gideon, onye, sounding opì-ike, kpọọ ulo Abieza ka o wee na-eso ya.
6:35 O we zigara ndi-ozi niile nke Manase, bụ ndị na-eso ya, na ndị ọzọ na ozi Asha, na Zebulun, na Naftali, onye we je izute ya.
6:36 Gideon we si Chineke: "Ọ bụrụ na ị ga-azọpụta Israel site m n'aka, dị nnọọ ka unu kwuru:
6:37 M ga-emekwa ka a ajị ajị anụ n'ebe nzọcha mkpụrụ. Ọ bụrụ na a ga-enwe igirigi naanị na ajị anụ, na niile bụ n'ala akọrọ, M ga-amarakwa na m n'aka, dika unu kwuru, ị ga-onwe Israel. "
6:38 N'ihi ya, ọ e mere. Na-ebili n'abalị, wringing si ajị anụ, ọ jupụtara a arịa igirigi.
6:39 Ọzọ kwa o we si Chineke: "Ka gị na iwe ga-enkindled megide m, ma ọ bụrụ na m na-anwale otu ugboro ọzọ, na-achọ ihe ịrịba ama na ajị anụ. M ekpe ekpere ka naanị ajị anụ ahụ nwere ike akọrọ, na ala dum nwere ike igirigi. "
6:40 Na na abalị, Chineke mere ka ọ rịọrọ. Na na ọ bụ akọrọ na na ajị anụ, ma na e igirigi ala dum.
7:1 Na Jerubeal, onye bụkwa Gideon, na-ebili n'abalị, na ndị niile ya na ya, wee rue isi-iyi nke a na-akpọ Harod. Ndien itienna Midian bụ na ndagwurugwu, na ugwu nke elu ugwu.
7:2 Na Jehova we si Gideon: "The ndị mmadụ na ị na-ọtụtụ, ma Midian ga-anapụta n'aka ha, n'ihi na mgbe ahụ Israel ike ebube megide m, ma na-ekwu, 'M na-tọhapụrụ site m ike.'
7:3 Gwa ndị mmadụ, ma na-akpọsa na ntị ndị niile, 'Onye ọ bụla nwere ụjọ ma ọ bụ egwu, ya laghachi. 'Ndien puku mmadụ iri abụọ nke ndị ikom ahụ si ndị mmadụ hapụ Mount Gilead we laghachi, na naanị iri puku nọgidere.
7:4 Na Jehova we si Gideon: "Ndị Izrel ka ọtụtụ. Iduga ha mmiri, na n'ebe ahụ ka m ga-anwale ha. Na ndị banyere onye m na-agwa gị ka o wee gaa na ị, ya na-aga; onye m ga-machibido na-aga, ya laghachi. "
7:5 Ma mgbe ndị mmadụ rịdata miri, Jehova we si Gideon: "Onye ọ bụla ga-efe mmiri na ire, dị ka nkịta na-emekarị n'apata, ị ga-ekewapụkwa ha onwe-ha. Mgbe ahụ ndị ga-aṅụ site na ekwe ha ikpere ga-aga n'akụkụ nke ọzọ. "
7:6 Na ọnụ ọgụgụ nke ndị na-nāra miri mmiri, site na-eweta ya na aka ọnụ, bụ atọ na narị ndị ikom. Na niile fọdụrụnụ nke ìgwè ṅụọ site na ekwe ikpere.
7:7 Na Jehova we si Gideon: "Site na narị atọ ndị ikom nāra miri mmiri, M ga-onwe gị, m ga-enyefekwa Midian n'aka-unu. Ma ka ihe niile ndị fọdụrụnụ nke ìgwè nloghachi ha. "
7:8 Ya mere, na-ewere nri, na opì, dị ka ha nọmba, ọ gwara ndị ọzọ nile nke ìgwè na-aga azụ ha na ụlọikwuu ha. Na na atọ na narị ndị ikom, o nyere onwe ya ndị agha. Ndien itienna Midian bụ n'okpuru, na ndagwurugwu.
7:9 N'otu abalị, Jehova we si ya: "Bilie, na-arịda mara ụlọikwuu. N'ihi na enyewom ha n'aka-unu.
7:10 Ma ọ bụrụ na ị na-atụ egwu na-aga naanị, ka ohu gị Purah ịgbada gị.
7:11 Na mgbe ị ga-anụ ihe ha na-ekwu, mgbe ahụ, gị aka ga-ike, na ị ga-arịda ọzọ obi ike n'ebe ha mara ụlọikwuu nke onye iro. "Ya mere,, rịdata na ohu ya Purah n'ime a òkè nke mara ụlọikwuu, ebe a nche nke ejikere ibu agha.
7:12 ma Midian, na Amalek, na niile dị n'ebe ọwụwa anyanwụ iche iche dinara ala-agbasa na ndagwurugwu, dị ka a ìgwè igurube. kamel ha, kwa, ndị na ọlu di n'aru, dika ájá nke dabeere na n'ụsọ oké osimiri.
7:13 Na mgbe Gideon ruteworo, onye gwara onye agbata obi ya a dream. O metụtara ihe ọ hụrụ, n'ụzọ nke a: "M wee hụ a dream, na ya yiri m ka ọ bụrụ nri, butere n'okpuru ntụ si akpọrepu barley, rịdata n'ime ulo-ikwū Midian. Na mgbe ọ bụla na ọ bịarutere a tent, ya gburu ya, ma kpuo ya, we wezuga boo ya n'ala. "
7:14 Ọ onye ọ gwara, zara: "Nke a bụ ihe ọ bụla ọzọ ma mma-agha Gideon, nwa Joash, a onye nke Israel. N'ihi na Jehova agbapụtawo Midian n'aka ya, na ha dum mara ụlọikwuu. "
7:15 Na mgbe Gideon nuru nrọ na nkọwa ya, ọ kpọrọ isi ala. O we laghachi n'ebe ha mara ụlọikwuu nke Israel, o wee sị: "Bilie! N'ihi na Jehova agbapụtawo ulo-ikwū Midian n'aka-ayi. "
7:16 O we kewa ọgu ndikom iri-atọ akụkụ. O we nye opì, na ite nke ihe nādighi, na oriọna maka n'etiti ite ahu, n'aka ha.
7:17 Na ọ sịrị ha: "Ihe ị ga-ahụ m na-eme, ime otu ihe ahụ. M ga-abanyekwa a òkè nke mara ụlọikwuu, na ihe m na-eme, ị ga-eso.
7:18 Mgbe opi ike nọ m n'aka blares si, ị ga-afụ opi, buruburu ọmuma-ulo, na-eti mkpu ọnụ Jehova na Gideon. "
7:19 na Gideon, na ọgu ndikom ya na ha nọ, banye a òkè nke mara ụlọikwuu, na mmalite nke na-eche nche na n'etiti abalị. Na mgbe ndị nche na-mere, ha malitere-afụ opi na ịkụ ite ahu megide onye ọzọ.
7:20 Ma mgbe ha dara ha opì-ike-atọ ebe gburugburu ụlọikwuu, na tiwara ha mmiri ite, ha na-enwe na oriọna na ha n'aka-ekpe, na fùa opì-ike-ha n'aka-nri aka. Ha wee tie mkpu, "Mma agha Jehova na nke Gidiọn!"
7:21 Na onye nke ọ bụla guzo n'ebe-Ya nile na ìgwè nke ndị iro. Na dum mara ụlọikwuu ahụ nọ n'ọgba aghara; na ha gbapụrụ, mkpu arịrị na-eti mkpu,.
7:22 Na ọgu ndikom iri-o wee na etiri opì. Jehova we mma agha ahụ dum mara ụlọikwuu, na ha nkwarụ na egbutu ibe,
7:23 na-agba ọsọ dị ka Bethshittah, na isi nke Abelmeholah na Tabbath. Ma ndị Israel na-achụ Midian, na-eti mkpu si na Naftalaị na Asha, na n'ebe nile nke Manase.
7:24 Gideon we ziga ndi-ozi nile nke Ugwu Ephraim, si, "Ịgbada izute Midian, na ogide mmiri n'ihu ha dị ka Bethbarah na Jọdan. "nile nke Efraim we tie nkpu, na ha nwere mmiri n'ihu ha, si na Jọdan we rue Bethbarah.
7:25 Na ọ na-achọ ijide ndị ikom abụọ nke Midian, Oreb na Zeeb, ha na-etinye Oreb nwua na Oké Nkume nke Oreb, na n'ezie, Zeeb, na mmanya nke Zeeb. Ha we chua Midian, ndị na-ebu isi Oreb na Zeeb ka Gideon, gafee mmiri Jọdan.
8:1 Ndikom Efraim we si ya, "Kedu ihe bụ ihe a, na ị chọrọ ime, nke mere na ị gaghị na-akpọ anyị mgbe ị gara ibuso Midian agha?"Ma ha baara ya mba ike, na bịara nso iji ime ihe ike.
8:2 Na ọ na-anabata ha: "Ma ihe m gaara eme nke ga-abụ oké dị ka ihe i mere? Abụghị otu ụyọkọ mkpụrụ vaịn nke Efraim mma karịa vintages nke Abieza?
8:3 Jehova napụtara n'aka gị ndị ndú nke Midian, Oreb na Zeeb. Gịnị ka m gaara eme nke ga-abụ oké dị ka ihe i mere?"Mgbe o kwuru nke a, ha spirit, nke e ọzịza megide ya, e jụụ.
8:4 Gideon we biarue ebe-Jordan, ọ gabiga ya na atọ na narị ndị ikom ya na ha nọ. Na ha dị ike gwụrụ na ha enweghị ike na-achụso ndị nọ na-agbapụ.
8:5 O we si ndikom Sukot, "Ana m arịọ gị, enye achịcha na ndị na-na m, n'ihi na ha na-ukwuu ebelatawo, nke mere na anyị ga-enwe ike ịchụso ihe Zeba na Zalmuna, ndị eze Midian. "
8:6 The isi Sukot zara, "Ikekwe n'ọbụ aka aka Zeba na Zalmuna nọ gị n'aka, na n'ihi nke a, ị na-arịọ na anyị na-enye ndị agha gị achịcha. "
8:7 Na ọ sịrị ha, "Ya mere mgbe, mgbe Onyenwe anyị ga-gēnye Zeba na Zalmuna m aka n'aka, M ga-mkpụrụ na anụ ahụ gị na ogwu na uke nke desert. "
8:8 Ma na-aga si n'ebe, ọ bịarutere Penuel. Ọ gwara ndị ndikom ebe n'otu aka ahụ,. Na ha na-zara ya, dị nnọọ ka ndikom Sukot zara.
8:9 O wee sị ha na-, "Mgbe m ga-laghachiri ka a mmeri na udo, M ga-ebibi elu a. "
8:10 Ma Zeba na Zalmuna nọ na-ezu ike na ha dum agha. Iri na ise puku ndị ikom na-ekpe nke niile ndị agha n'ebe ọwụwa anyanwụ ndị mmadụ. Na otu narị puku mmadụ iri abụọ dike na-ebu mma agha e gbuturu.
8:11 Na Gideon rigoro site ụzọ ndị bụ ndị bi n'ụlọikwuu, ka ọwụwa anyanwụ nke Noba na Jogbehah. Na ọ tụrụ ìgwè nke ndị iro, onye nwere obi ike ma na-chere ihe ọ bụla oghom.
8:12 Na Zeba na Zalmuna ọsọ. Na Gideon chua na sogidesiri ha, eziga ha dum agha n'ọgba aghara.
8:13 Na-alọta si agha n'ihu ọwụwa anyanwụ,
8:14 o we were nwa okorobịa si n'etiti ndikom Sukot. Na ọ jụrụ ya aha ndị ndú na okenye Sukot. Ọ kọwara na iri asaa na asaa ndị ikom.
8:15 O wee gaa na Sukot, na ọ sịrị ha: "Le Zeba na Zalmuna, n'elu onye ị baara m, si: 'Ikekwe aka Zeba na Zalmuna nọ gị aka, na n'ihi nke a, ị na-arịọ na anyị na-enye nri ndị ahụ na-ahụsi anya na ebelatawo. ' "
8:16 Ya mere, O were ndi-okenye obodo, na, na iji ogwu na uke nke desert, ọ nzọcha ha na ndị a, o bee ndikom Sukot iberibe.
8:17 Ọ na-agbanwe ulo-elu Penuel, o wee gbuo ndị ikom obodo.
8:18 Ọ si Zeba na Zalmuna, "Olee ụdị mmadụ, na ha ndị ị gburu na Tebọ?"Ha zaghachiri,, "Ha bụ ndị dị ka gị, na otu n'ime ha bụ dị ka nwa eze. "
8:19 Ọ zara ha: "Ha bụ ndị ụmụnna m, umu nne m. Jehova nādi ndu, ma ọ bụrụ na ị na-ahụ chebere ha, M ga-egbu gị. "
8:20 O we si Jeta, ọkpara, "Bilie, me ka ha ọnwụ. "Ma, o kweghị amịpụtaghị mma agha ya. Maka na ụjọ, ịbụ ka a nwata.
8:21 Na Zeba na Zalmuna we si: "Ị ga-ebili ọtọ ma ọsọ megide anyị. N'ihi na ike nke a nwoke kwekọrọ na ya afọ. "Gideon we bilie, na o gburu Zeba na Zalmuna. O we were ihe ịchọ mma na studs, na nke n'olu nke eze kamel na-na-chọrọ mma.
8:22 Na ndikom nile nke Israel we si Gideon: "Ị ga-achị anyị, gị na nwa gị, gị na nwa gị na nwa. N'ihi na ị na tọhapụrụ anyị n'aka Midian. "
8:23 Na ọ sịrị ha: "M ga-agaghi-achi unu. Nwam agaghi-achi kwa unu. Kama, Jehova ga-achị unu. "
8:24 Na ọ sịrị ha: "M na-arịọ onye arịrịọ si ị. Nye m ọla ntị gị ihe nkwata. "N'ihi na ndi Ishmael na-agba nkịtị na-eyi gold ọla ntị.
8:25 ha zara, "Anyị nwere nnọọ njikere inye ha." Na-agbasa ákwà mgbokwasị n'ala, Ha fe-kwa n'elu ya ọla ntị si kwatara.
8:26 Na arọ nke ọla ntị na ọ rịọrọ bụ otu puku na narị asaa shekel ọla-edo, wezụga ihe ịchọ mma, na necklaces, na-acha odo odo uwe, nke ndi-eze Midian na-agba nkịtị na-eji, na wezụga gold ígwè na kamel.
8:27 Gideon we me ephod site na ndị a, o wee na ya na ya obodo, Ophrah. Na niile nke Israel iko ya, na ọ ghọrọ a bibie Gideon na ulo-ya nile.
8:28 Ma Midian ruru ala n'iru umu Israel. Ma ha si nwee ike ọ bụla ogologo iweli olu ha. Kama ala zuru ike ruo afọ iri anọ, mgbe Gideon n'isi oche.
8:29 Na Jerubeal, nwa Joash, wee biri n'ụlọ ya.
8:30 Na o nwere iri asaa umu, onye wee si na ya onwe ya n'apata-ukwu aka. N'ihi na ọ nwere ọtutu ndinyom.
8:31 Ma iko ya nwaanyị, ndị ọ bụ ya na Shekem, mụtaara ya nwa nwoke aha ya bụ Abimelek.
8:32 na Gideon, nwa Joash, nwua n'ezi agadi, na e liri ya n'ílì nna-ya, n'Ọfra, nke ezinụlọ Ezri.
8:33 Ma mgbe Gideon nwuru, umu Israel we wezuga, na ha kwara iko na Bealim. Ha wee tie a na ọgbụgba ndụ na Baal, nke mere na ọ ga-abụ ha na chi.
8:34 Na ha echetaghị Jehova Chineke ha, onye napụtara ha n'aka ndị iro ha niile n'akụkụ niile.
8:35 Ma ka ha mere na-egosi ebere n'ụlọ Jerubeal Gideon, dị ka ihe niile na ezi ihe nke O mere Israel.
9:1 Ma Abimelek, nwa Jerubeal, we jerue Shekem, ya nne nwa ụmụnna, na ọ gwara ha, na ndị niile na ndị ikwu nke ulo ya nne nwa nna nna, si:
9:2 "Gwa ndị ikom niile nke Shechem: Nke dị mma maka ị: na ndị ikom iri asaa, niile, bú umu Jerubeal, ga-achị unu, ma ọ bụ na otu onye ga-achị unu? Na-atụle na-na mụ onwe m unu na ọkpukpu-anụ gị. "
9:3 Na ya nke nne nwa ụmụnna kwuru banyere ya na ndikom nile nke Shechem, okwu ndia nile, na ha chọrọ obi ha mgbe Abimelek, si, "Ọ bụ nwanne anyị."
9:4 Ha wee nye ya arọ nke iri asaa ego ọlaọcha si n'ebe di elu nke Beal-berith. na nke a na, ọ goro onwe ya indigent na-awagharị awagharị ikom, ha we so ya.
9:5 O wee gaa n'ulo nna-ya n'Ọfra, o gbuo ụmụnne ya, bú umu Jerubeal, ndị ikom iri asaa, n'elu otù nkume. Fọdu naanị Joatham, nwa nwoke ikpeazụ nke Jerubeal, o we nọ nzuzo.
9:6 Ndikom nile nke Shekem we chikọta, na ezinụlọ niile nke obodo nke Milo, ha wee na họpụtara Abimelek dị ka eze, n'akuku osisi terebinth nke nēguzo na Shekem.
9:7 Mgbe nke a a kọrọ na Jotam, o we je guzo n'elu ugwu Geraizim. Na-eweli olu ya, o tiri mkpu, sị: "Gee m ntị, nwe Shekem, na Chineke nwere ike ige gị ntị.
9:8 The osisi gara ịhọpụta a onwe-ha eze. Ha we si osisi olive, 'Ọchịchị anyị.'
9:9 Ma ọ zara, 'Olee otú m pụrụ ahapụ m n'abụba, nke ma chi na ndị ikom na-eji, na-apụ na-akwalite n'etiti osisi?'
9:10 Na osisi si osisi fig, 'Bịa na-anabata ka eze ike anyị.'
9:11 Ma ọ zara ha, 'Olee otú m pụrụ ahapụ m uto, na m nnọọ ụtọ na mkpụrụ osisi, na-apụ na-akwalite n'etiti osisi ndị ọzọ?'
9:12 Na osisi wee sị ndị vine, 'Bịa na eze anyị.'
9:13 Ma ọ zara ha, 'Olee otú m pụrụ ahapụ m wine, nke na-enye ọṅụ ka Chineke na mmadụ na, na a ga-akwalite n'etiti osisi ndị ọzọ?'
9:14 Na osisi nile wee sị osisi ogwu, 'Bịa na eze anyị.'
9:15 Ma ọ zara ha: 'Ọ bụrụ na n'ezie ị ga-ahọpụta m ịbụ eze, abịa na zuru ike na ndò m. Ma ọ bụrụ na ị na-adịghị njikere, ka ọkụ wee si ogwu, ka ọ na-eripịa osisi sida nke Lebanọn. ' "
9:16 Ya mere ugbu a, ma ọ bụrụ na ị na-ezi ezi ma na-enweghị mmehie n'ịhọpụta Abimelek dị ka a eze-unu, na ọ bụrụ na i mewo nke ọma Jerubeal, na ulo-ya, na ọ bụrụ na ị kwụọ ụgwọ, n'oge ya, uru nke ya onye lụrụ ọgụ na n'ihi gị,
9:17 na onye nyere ndụ ya n'ihe ize ndụ, ka o wee na-anapụta gị n'aka ndị Midian,
9:18 ezie na ị ugbu a ebiliwo megide ụlọ nna m, na gburu ya na ụmụ, ndị ikom iri asaa, n'elu otù nkume, na emewo Abimelek, nwa ya nwayi, dị ka a eze bi Shechem, ebe ọ bụ nwanne gị,
9:19 ma ọ bụrụ na ya mere, unu ndị ziri ezi na emewo omume na-enweghị kpatara Jerubeal ulo-ya, mgbe ahụ i kwesịrị-aṅụrị ọṅụ n'ụbọchị taa na Abimelek, na ọ ga-aṅụrị ọṅụ na i.
9:20 Ma ọ bụrụ na ị emewo omume rụrụ arụ, ka ọku wee si ya na-eri bi Shechem na obodo nke Milo. Na ike ọkụ wee si ndi-nwe Shekem na si n'obodo Milo, na-eripịa Abimelek. "
9:21 Na mgbe o kwusịrị ihe ndị a, ọ gbara ọsọ je Bia. Ọ we biri nime ebe, n'ihi ụjọ Abimelek, nwanne ya.
9:22 Na Abimelek we buru eze Israel arọ atọ.
9:23 Ma Jehova na-etinye a dị mwute na mmụọ n'etiti Abimelek na ndi bi na Shechem, onye malitere asị ya,
9:24 na ebe ụta maka mpụ nke na-egbu nke iri asaa umu Jerubeal, na maka ịwụsị ọbara ha, n'isi Abimelek, nwanne ha, na ihe ndị fọdụrụ n'ime ndị ndú nke Shechemites, -enyere ya aka.
9:25 Na ha guzo nwere ndị zoro na nzuko nke ugwu. Ma mgbe ha na nọ na-eche ya rutere, ha mere robberies, ewere kwatara na-agabiga. Na a kọọrọ Abimelek.
9:26 ugbu a Geal, nwa Ebed, wee soro ụmụnne ya, gafee Shekem. Na ndi bi na Shechem, uplifted site ya rutere,
9:27 la n'ubi, Ịtọ n'efu ka ubi vaịn, na-azọpịa ihe mkpụrụ vaịn. Na mgbe na-abụ abụ na-agba egwú, ha banyere okpukpe Shinto nke chi ha. Na mgbe oriri na nkwari, na-aṅụ, ha bụrụ ọnụ Abimelek.
9:28 Geal, nwa Ebed, tikuru: "Ònye bụ Abimelek, na ihe na-Shechem, na anyị na-ejere ya ozi? Ọ bụghị nwa Jerubeal, onye họpụtara Zebul, ohu ya, dị ka onye-isi ndikom Hemoa, nna Shekem? Gịnị mere anyị kwesịrị-ejere ya ozi?
9:29 M na-achọ na onye na-edebe ndị a n'okpuru m n'aka, ka m wee wepụ ya Abimelek si n'etiti ha. "E wee kọọrọ Abimelek, "Kpọkọta ndị ìgwè ndị agha, na obibia. "
9:30 n'ihi Zebul, onye na-achị obodo, n'elu-anụ Okwu nke Geal, nwa Ebed, wee wee oké iwe.
9:31 O we zigara ndi-ozi na nzuzo Abimelek, si: "Lee, Geal, nwa Ebed, eruwo na Shekem na ụmụnne ya, na o wepụtawo obodo a imegide gị.
9:32 Ya mere, bilie n'abalị, na ndị na-na na ị na, na ụgha zoro n'ala.
9:33 Na na mbụ ìhè ụtụtụ, ka anyanwụ na-ebili, ọsọ n'elu obodo. Na mgbe ọ na-aga megide unu, ndị ya, ime ya ihe ị na-enwe ike ime. "
9:34 Na Abimelek we bilie, na ndị agha ya niile, n'abalị, ọ we do nēru nbì nso Shekem na anọ ebe.
9:35 Geal, nwa Ebed, wee si, o we guzo n'ọnụ ụzọ ámá nke obodo. Abimelek we bilie, na ndị agha niile ya na ya, si ebe nēru nbì.
9:36 Na mgbe Geal hụrụ ndị mmadụ, ọ sịrị Zebul, "Lee, a ìgwè mmadụ si n'ugwu. "O zara ya, "Unu na-ahụ bụ onyinyo ugwu, dị ka ma ọ bụrụ na ha bụ ndị isi nke ndị ikom, na na a na-aghọgbughị a njehie. "
9:37 Ọzọ, Geal we, "Lee, a ndị mmadụ na-agbada si n'etiti ala, na otu ụlọ ọrụ na-erute n'ụzọ na anya kwupụta oak. "
9:38 Zebul we si ya: "Olee ebe ọnụ gị ugbu a, na nke i kwuru, 'Ònye bụ Abimelek na anyị ga-ejere ozi ya?'Onye a ọ bụghị ndị mmadụ na ị na-na-eleda? Pụọ na ibuso ya agha. "
9:39 Ya mere, Geal we pua, ya na ndị Shechem ekiri, na o busoro Abimelek,
9:40 onye na-achụ ya, na-agba ọsọ, na ụgbọala ya n'obodo. Ọtụtụ ndị egbutu ya n'akụkụ, ọbụna n'ọnụ ụzọ ámá nke obodo.
9:41 Abimelek mara ụlọikwuu n'ebe nọdu n'Aruma. Ma Zebul chụpụrụ Geal na ndị ibe ya na ndị obodo, na ọ gaghị ekwe ka ha nọgide na ya.
9:42 Ya mere, n'echi, ndị la n'ọhịa. Na mgbe a a kọrọ Abimelek,
9:43 O were ndị agha ya, na-ekewa ya usu atọ, o enịm nēru nbì n'ọhia. Na ịhụ na ndị Izrel wee si obodo, O wee bilie ọsọ n'elu ha,
9:44 tinyere ya ụlọ ọrụ, N'ịwakpo na nọchibidoro obodo. Ma abụọ ụlọ ọrụ ndị ọzọ na-achụ ndị iro gbasasịa na ubi.
9:45 Ma Abimelek wakpokwara obodo niile na ụbọchị. O wee jide ya, na o gburu ndị bi n'ime ya, na o bibiri ya, nke mere na o fesasịrị nnu na ya.
9:46 Na mgbe ndị bi na ulo-elu Shekem nụrụ banyere nke a, ha banyere n'ụlọ nsọ nke chi ha, Berith, ebe ha kpụrụ a ọgbụgba ndụ ya na ya. Na ọ bụ n'ihi nke a, na ebe-ya were ya aha. Na ya nke-uku ewusiri ike.
9:47 Abimelek, nwekwara anụ na ndikom ulo-elu Shekem we Igbere,
9:48 rịgooro n'ugwu Zalmon, na ndi-ya nile. Ma na-ewere anyụike, ọ igbutu alaka nke a osisi. Na-ebikwasị ya n'ubu, na-ebu ya, ọ sịrị ndị enyi ya, "Ihe ị na-ahụ ka m na-eme, ị ga-eme ngwa ngwa. "
9:49 Ya mere, atụsi igbute alaka osisi, ha soro onye ndú ha. Na gburugburu n'ebe e wusiri ike, ha sunye ya ọkụ. N'ihi ya, ọ dabara na, site anwụrụ ọkụ na ọkụ, otu puku mmadụ nwụrụ, ikom na ndị inyom ọnụ, na ndị bi na nke ulo-elu Shekem.
9:50 Abimelek we, mwube si n'ebe, rutere n'obodo Tibez, nke o gbara ya gburugburu wee nọchibido na ndị agha ya.
9:51 E, na n'etiti obodo, a elu, nke ndị ikom na ndị inyom nọ na-agbapụ ọnụ, na ndị isi niile nke obodo. Na, ọ nnọọ ike akara ụzọ ámá, ha guzo n'elu ụlọ nke ụlọ elu iji chebe onwe ha.
9:52 Abimelek, na-eru nso ulo-elu, agha valiantly. Na-eru nso n'ọnụ ụzọ ámá, ọ gbalịsiri ike ka ya na ọkụ.
9:53 Ma, le, otu nwaanyị, atụba a iberibe nke a nkume igwe nri si n'elu, gburu isi nke Abimelek, ma nyawaa ya okpokoro isi.
9:54 Ọ ngwa ngwa kpọrọ ya nēbu ihe-agha, ma sị ya, "Mịrị mma agha gị ma gbuo m, ma ọ nwere ike kwuru na m na-gburu a nwaanyị. "Ma, eme ka e nyere ya iwu, o gburu ya.
9:55 Na mgbe ọ nwụrụ anwụ, ndị niile nke Israel ndi ha na ya laghachi n'ebe obibi ha.
9:56 Ya mere otú Chineke akwụghachi ihe ọjọọ na Abimelek mere megide nna ya site n'igbu ụmụnne ya iri asaa.
9:57 The Shechemites nwekwara e nyere ntaramahụhụ maka ihe ha mere, na nkọcha Jotam, nwa Jerubeal, dakwasiri ha.
10:1 Mgbe Abimelek, a ndú bilie Israel, Tola, nwa Pua, ọnụmara dị iche iche nwanne nna Abimelek, a onye nke Issachar, onye biri na Shamir na n'ugwu Efraim.
10:2 Ndien enye ekpe ikpe Israel iri abụọ na atọ afọ, o we nwua, elìe na Shamir.
10:3 Mgbe ya n'ọnọdu Jaia, a Gilead, ekpe ikpe Israel iri abụọ na afọ abụọ,
10:4 enwe orú umu ọdụ iri atọ na-eto eto na inyinya-ibu, na bu ndi-isi nke orú obodo na iri, nke si ya aha a na-akpọ Havot Jaia, nke ahụ bụ, Havot-jaia, ọbụna ruo ugbu a, n'ala Gilead.
10:5 Jair akpa, na e liri ya n'ebe ahu nke a na-akpọ Kamon.
10:6 Ma ụmụ Israel me ihe jọrọ njọ n'anya Jehova, isonyere ọhụrụ mmehie ochie, ha we fè arusi, Bealim na Ashtarot, na chi nile nke Siria, na Saịdọn, na nke Moab na ụmụ Amọn, na ndi Filistia. Na ha hapụrụ Jehova, na ha na-adịghị efe ya.
10:7 Ma Jehova, na-ewe iwe megide ha, nye ha n'aka ndi Filistia, na umu Amon.
10:8 Na ha na-arịa ma vehemently emegbu emegbu maka arọ iri na asatọ, niile, ndị bi n'ofè Jọdan, n'ala ndi-Amorait, nke di na Gilead,
10:9 ka ndị dị otú ahụ a ukwuu na umu Amon, na-agafe Jọdan, tọgbọrọ n'efu na Juda na Benjamin na Efraim. Na Israel na-uku n'ala.
10:10 Na-etiku Jehova, ha kwuru: "Anyị emehiewo gị. N'ihi na anyị ahapụwo Jehova Chineke anyị, na anyị fè Bealim. "
10:11 Jehova we nye ha: "Ndi Ijipt, na ndi-Amorait, na umu Amon, na ndi Filistia,
10:12 na kwa ndi Zaidon, na Amalek, na Canaan, emegbu gị, na otú i tikuru m, na m napụtara unu n'aka-ha?
10:13 Ma ị hapụwo m, na i na-efe chi ndị mba ọzọ. N'ihi nke a, M ga-adịghị anọgide na-onwe gị ihe ọ bụla ọzọ.
10:14 Gaa, ma na-akpọku chi unu họọrọ. Ka ha onwe gị na oge nke nhụjuanya. "
10:15 Ụmụ Israel we si Jehova: "Anyị emehiewo. Ị nwere ike ịkwụ anyị ụgwọ n'ụzọ ọ bụla na-amasị gị. Ma anyị nwere onwe anyị ugbu a. "
10:16 Na-ekwu ihe ndị, ha na-achụpụ ndị niile arụsị nke chi ndị mba ọzọ ha na mpaghara, ha we fè Jehova, bú Chineke. Na metụrụ ya n'ahụ ha ná nsogbu.
10:17 Ma mgbe ahụ umu Amon, na-eti mkpu si na ọnụ, ulo-ikwū-ha na ụlọikwuu ha na Gilead. Ụmụ Israel zukọtara imegide ha, na ha mara ụlọikwuu n'ebe na Mizpa.
10:18 Na ndị ndú nke Gilead sịrị ibe, "Onye ọ bụla n'etiti anyị ga-akpa na-amalite ịgba mgba megide ụmụ Amọn, ọ ga-onye ndú nke ndị mmadụ nke Gilead. "
11:1 N'oge ahụ, enwere a Gilead, Jephthah, a dị ike na a fighter, nwa a nọ na-nwaanyị, na a mụrụ ya nke Gilead.
11:2 Ugbu a Gilead nwekwara nwunye, onye Ọ natara umu. na ha, mgbe na-eto eto, chupu Jefta, si, "Ị gaghị eketa n'ulo nna anyị, n'ihi na a mụrụ gị nke ọzọ nne. "
11:3 Ya mere, na-agba ọsọ ma na-ezere ha, o biri n'ala Tob. Na ndị ikom na-indigent na-apụnara mmadụ sonyeere ya na ya, ha we so ya dị ka onye ndú ha.
11:4 N'ụbọchị ndị, umu Amon busoro Israel.
11:5 Na a na-nguzosi ike wakpoo, ndi-okenye Gilead gaa ka ha wee nweta maka enyemaka ha Jephthah, si n'ala Tob.
11:6 Ha we si ya, "Bịanụ ka anyị ndú, buso umu Amon. "
11:7 Ma ọ zara ha: "Ọ bụghị gị na ndị kpọrọ m asị, na onye igba m nke ụlọ nna m? Ma ugbu a, ị bịakwute m, manyere site mkpa?"
11:8 Na ndị ndú nke Gilead we si Jefta, "Ma ọ bụ n'ihi na nke a dị mkpa na anyị na-bịakwutere gị ugbu a, nke mere na ị nwere ike ịtọ na anyị, buso umu Amon, na-ọchịagha n'elu ndi nile bi na Gilead. "
11:9 Jephthah nwekwara sị ha: "Ọ bụrụ na ị bịakwute m ka m wee na-alụ ọgụ maka gị imegide umu Amon, na ọ bụrụ na Jehova ga-anapụta ha n'aka m aka, m ga-enwe n'ezie gị onye ndú?"
11:10 Ha wee zaa ya, "Jehova na-anụ ihe ndị a bụ ya onwe ya Onye Ogbugbo na Onyeàmà ahụ na anyị ga-eme ihe anyị kwere ná nkwa."
11:11 Na Jephthah wee na ndị ndú nke Gilead, na ndị niile mere ya onye ndú ha. Jefta kwuru okwu ya nile, na n'anya Jehova, na Mizpa.
11:12 O we zigara ndi-ozi eze umu Amon, onye sịrị na ya n'ihi, "Gịnị dị n'etiti mụ na gị, na ị ga-agakwuru megide m, ka unu wee dina n'efu ka m ala?"
11:13 Na ọ na-anabata ha, "Ọ bụ n'ihi na Izrel naara m ala m, mgbe ọ rịgooro si Egypt, si akụkụ nke Anon, ruo Jabọk na Jọdan. ugbu a,, weghachi ndị a ka m na udo. "
11:14 Jefta ọzọ nyere ha, na o nyere ha iwu na-ekwu na eze Amọn:
11:15 "Jephthah kwuru nke a: Izrel ewereghị ala Moab, ma ọ bụ ala ụmụ Amọn.
11:16 Ma mgbe ha rigoro ọnụ si Egypt, o jere ije site na desert dị ka Oké Osimiri Uhie, , o wee banye Kedesh.
11:17 O we zigara ndi-ozi eze Edom, si, 'Hapụ m ka m na-gafere n'ala gị.' Ma, ọ bụghị njikere ekweta nāriọ aririọ-ya. N'otu aka ahụ, o we zigara eze Moab, bụ ndị na-ekweghị enye ya Itie. O wee na-egbu oge na Kedesh,
11:18 o gburugburu gburugburu n'akụkụ nke ala Edom na ala Moab. Na ọ bịarutere na ncherita-ọwụwa anyanwụ nke mba n'ala Moab. Ọ mara ụlọikwuu n'ebe gafee Anon. Ma, ọ bụghị njikere tinye n'ókè-ala Moab. (N'ezie, Anon bu ókè-ala nke ala Moab.)
11:19 Na Israel we ziga ndi-ozi Saihon, eze nke ndi-Amorait, onye bi na Heshbon. Ha we si ya, "Hapụ m ka m gafee n'ala gị dị ka osimiri."
11:20 ma ọ, kwa, na-eleda okwu nke Israel, ekweghị ya ịgafe site ya n'ókè-ala. Kama, achịkọta ihe na ọlu di n'aru ìgwè, ọ pua megide ya na Jehaz, na o guzogidere ike.
11:21 Ma Onyenwe anyị napụtara ya, na ndị niile ya na agha, n'aka nke Israel. Na gbuo ya, na o nwere ala nile nke ndi-Amorait, nke bi na mpaghara,
11:22 na ya niile akụkụ, site n'Anon rue Jekob, na si wilderness ọbụna Jọdan.
11:23 Ya mere, ọ bụ Onyenwe anyị, Chineke nke Israel, onye kwaturu-Amorait, site ndị ya Israel na-alụ ọgụ megide ha. Na ugbu a ị na-achọ inweta ala ya?
11:24 Abụghị ihe na chi-unu Kemosh nwere ji gị site na nri? Ya mere, ihe Jehova bụ Chineke anyị nwetara site mmeri dara anyị dị ka a nketa.
11:25 Ma ọ bụ ị, ikekwe, mma karịa Belak, nwa Zipoa, eze Moab? Ma ọ bụ ị na-enwe ike ịkọwa ihe ya na-arụrịta megide Israel, na ihe mere o buso ya?
11:26 Ma ọ bụ ezie na o biri na Heshbon, na obodo ntà ya, na n'Aroea, na obodo ntà ya, na n'obodo nile nso Jọdan ruo narị afọ atọ, mere nwere ị, n'ihi na otú ogologo a oge, tinye n'ihu ihe ọ bụla banyere nke a na-ekwu?
11:27 Ya mere, M na-adịghị emehie megide gị, ma unu na-eme ihe ọjọọ megide m, site na-ezisa-ezighị ezi agha m. Ka Jehova na-Onyeikpe na Arbiter a ụbọchị, n'etiti Israel na umu Amon. "
11:28 Ma eze umu Amon inyịmeke na-ekweta okwu nke Jephthah ahụ o nyere site ndị ozi.
11:29 Ya mere, Mọ nke Chineke we zuru ike n'elu Jephthah, na circling gburugburu Gilead, na Manase, na Mizpa nke Gilead, na-agafe si n'ebe umu Amon,
11:30 o mere a nkwa Chineke, si, "Ọ bụrụ na ị ga-anapụta ụmụ Amọn m aka n'aka,
11:31 onye ọ bụla ga--akpa na-apụ apụ na ụzọ ụlọ m izute m, mgbe m lọtara n'udo site n'aka ụmụ Amọn, otu ga m na-enye dị ka a ọku nye Jehova. "
11:32 Jefta gafere umu Amon, ka o we buso ha agha. Jehova we nye ha n'aka ya.
11:33 O gbuo ha site n'Aroea, dị ka n'ọnụ ụzọ Minit, orú obodo, na rue Ebel, nke kpuchie ubi vaịn, na ihe di uku ri nne-egbu. Na umu Amon ruru ala site ụmụ Izrel.
11:34 Ma mgbe Jephthah laghachi Mizpah, na ulo nke aka ya, ya naanị nwa zutere ya na egwú-otiti na egwú. N'ihi na ọ na-adịghị na ụmụaka ndị ọzọ.
11:35 Na mgbe ọ hụrụ ya, ọ dọwara uwe-ya, o wee sị: "Ewoo, nwa m nwanyị! I ghọgburu m, gị onwe gị na e ghọgburu. N'ihi na m meghee ọnụ m Jehova, na m nwere ike ime ihe ọ bụla ọzọ. "
11:36 Ọ si ya, "Nna m, ma ọ bụrụ na i megheworo ọnụ gị na Jehova, ime m ihe ọ bụla i kwere ná nkwa, ebe mmeri e nyere gị, nakwa dị ka ịbọ ọbọ megide ndị iro gị. "
11:37 Ọ si nna-ya: "Nyekwa na m na nke a otu ihe, nke m na-arịọ. Hapụ m ka m, ka m wee na-awagharị na-obot ruo ọnwa abụọ, na na m nwere ike na-eru uju m amaghị nwoke na enyi m. "
11:38 Ọ si ya, "Gaanụ." O wepụtara ya ruo ọnwa abụọ. Na mgbe ọ na-ahụ hapụrụ ya na enyi ya na ndị enyi, ọ kwaara-amaghị nwoke na obot.
11:39 Ma mgbe ọnwa abụọ emebiela, ọ laghachiri nna ya, na o mere ya dị nnọọ ka o kwere, ezie na ọ maara na ọ dịghị onye. site na nke a, omenala toro Israel, na omume e chekwara,
11:40 dị otú ahụ na, mgbe ọ bụla afọ na-aga, ndị inyom Izrel na ikpokota dị ka otu, na ha kwara arịrị, na nwa nwaanyị nke Jephthah, onye Gilead, ụbọchị anọ.
12:1 Ma, le, a imegide ọchịchị bilie Ephraim. Mgbe ahụ, mgbe na-agafe n'ebe ugwu, ha we si Jefta: "Mgbe ị na-aga ibuso umu Amon, mere ndị ị na-adịghị njikere ka a kpọọ anyị, ka anyị wee na-aga na ị? Ya mere, anyị ga-ọkụ n'ụlọ gị. "
12:2 O we za ha: "M na ndim na a oké ọgụ megide umu Amon. Na m na-akpọ gị, ka unu wee na-enye aka na-enyere m. Na ị bụghị njikere ime otú ahụ.
12:3 Na nghọta nke a, M na-etinye m ndụ na m aka, na m na-agafe ka umu Amon, Jehova we nye ha n'aka m aka. Gịnị m ikpe, na ị ga-ebili n'oge agha megide m?"
12:4 Ya mere, akpọ onwe ya na ndikom nile nke Gilead, o busoro Ephraim. Na ndikom Gilead gbuo Ephraim, n'ihi na o kwuru, "Gilead bụ onye gbara ọsọ ndụ Ephraim, na ọ dị ndụ na n'etiti Efraim na Manase. "
12:5 Na ndị Gilied nwere ngabiga-miri Jọdan, tinyere nke Ephraim bụ laghachi. Na mgbe onye ọ bụla na nọmba nke Ephraim ruteworo, na-agba ọsọ, na kwuru, "Ana m arịọ na ị na-ekwe ka m na-agafe,"Ndị Gilied na-asịkwa ya, "Ị nwere ike ịbụ onye na Efraim?"Ma ọ bụrụ na o kwuru, "Abụ m bụghị,"
12:6 ha ga-arịọ ya, mgbe na-ekwu 'Shibboleth,'Nke asughariri dika' ntị nke ọka. 'Ma ọ ga-aza' Sibboleth,'Ghara inwe ike iji gosi na okwu maka ntị nke ọka na otu akwụkwọ ozi. Ozugbo apprehending ya, ha ga-ebipụ ya akpịrị, n'otu ịgafe ebe Jọdan. Na na na oge nke Efraim, iri anọ na puku abụọ na dara.
12:7 Na Jephthah, onye Gilead, ekpe ikpe Israel ke isua itiokiet. O we nwua, na e liri ya na obodo-ya na Gilead.
12:8 Mgbe ya, Ịbzan nke Bethlehem ekpe ikpe Israel.
12:9 O nwere orú umu, na otu nọmba nke ndinyom, onye o we zilaga ga-enye ndị di. Na ọ nabatara ndị inyom ya na ụmụ nke otu nọmba, eweta ha n'ụlọ ya. Ndien enye ekpe ikpe Israel ke isua itiaba.
12:10 O we nwua, na e liri ya na Betlehem.
12:11 Mgbe ya n'ọnọdu Ilọn, a Zebulunite. Ndien enye ekpe ikpe Israel ke isua duop.
12:12 O we nwua, na e liri ya na Zebulun.
12:13 Mgbe ya, Abdon, nwa Hilel, a Piraton, ekpe ikpe Israel.
12:14 Na o nwere iri anọ umu, ma site na ha iri atọ bụ, niile nọkwa n'elu iri asaa na-eto eto na inyinya-ibu. Ndien enye ekpe ikpe Israel ke isua itiaita.
12:15 O we nwua, na e liri ya na Piraton, na ala nke Efraim, na ugwu nke Amalek.
13:1 Na ọzọ, umu Israel me ihe jọrọ njọ n'anya Jehova. Ọ nye ha n'aka ndi Filistia ọgu arọ abua.
13:2 Ugbu a, e nwere otu nwoke nke si Zọra, na nke na ngwaahịa nke Dan, onye aha ya bụ Manoa, nwere a nwanyị aga.
13:3 Na otu mmụọ ozi nke Jehova pụtara ìhè n'ihu ya, o wee sị: "Ị na-bụbu nwanyị aga n'echiche na-enweghị ụmụ. Ma ị ga-atụrụ ime na ibu nwa.
13:4 Ya mere, na-elekọta na unu adịghị aṅụ mmanya ma ọ bụ ike ọṅụṅụ. Ma ị ga-eri ihe ọ bụla na-adịghị ọcha.
13:5 N'ihi na ị ga-atụrụ ime na ibu nwa, onye isi ọ dịghịkwa agụba ga-emetụ. N'ihi na ọ ga-abụ onye Naziraịt nke Chineke, si ya nwa ọhụrụ nakwa site n'afọ nne-ya. Ọ ga-amalite onwe Israel n'aka ndị Filistia. "
13:6 Na mgbe o na-arahụ di ya, O wee sị ya: "A onye nke Chineke wee ruo m, inwe ihu nke onye Angel, ukwuu egwu. Ma mgbe m ase ya, onye ọ bụ, na ebe ọ bụ site na, na ihe aha ọ na-akpọ, enye inyịmeke ịgwa m.
13:7 Ma ọ zara: Le, ị ga-atụrụ ime na ibu nwa. Na-elekọta na unu adịghị aṅụ mmanya ma ọ bụ ike ọṅụṅụ. Na ị gaghị na-eri ihe ọ bụla na-adịghị ọcha. N'ihi na nwa na-enweghị ga-onye Naziraịt nke Chineke site ya nwa ọhụrụ, si n'afọ nne ya, ọbụna ruo ụbọchị ọnwụ ya. '"
13:8 Na Manoa kpere Jehova, o wee sị, "Ana m arịọ gị nwe, na onye nke Chineke, ndi i zitere, nwere ike-abịa ọzọ, na ike na-akụziri anyị ihe anyị kwesịrị ime banyere nwa okoro bụ onye a ga-amụ. "
13:9 Jehova ṅara ntị ekpere nke Manoa, na Angel nke Jehova pụtara ọzọ nwunye ya, ọdụ na a ubi. Ma di ya Manoa bụghị ya. Na mgbe ọ hụrụ Angel,
13:10 enye awara efehe aka ya na di ya. Na ọ kọọrọ ya, si, "Lee, nwoke pụta ìhè n'ihu m, onye mụ na ya hụrụ tupu. "
13:11 O wee bilie soro nwunye ya. Na-aga na-nwoke, o wee sị ya, "Ị bụ onye na-gwara nwunye m?"O zara, "Abụ m."
13:12 Na Manoa we si ya: "Mgbe a ga-okwu gị mezuo. Gịnị ka ị chọrọ ka nwa okoro ime? Ma ọ bụ site na ihe ọ ga-edebe onwe ya?"
13:13 Mọ-ozi nke Jehova we si Manoa: "Banyere ihe nile banyere nke m gwara gị na nwunye, ya onwe kwesịrị izere.
13:14 Ka ya na-eri ihe ọ bụla si n'osisi vaịn. Ọ nwere ike ọ gaghị aṅụ mmanya ma ọ bụ ike ihe ọṅụṅụ. Ọ nwere ike na-eri ihe ọ bụla na-adịghị ọcha. Ka ya na-edebe ma na-edebe ihe m gwara ya. "
13:15 Na Manoa we si mọ-ozi nke Onye-nwe, "Ana m arịọ gị na-ekweta aririọm, na ka anyị kwadebe a eyen si ewu. "
13:16 Na Angel zara ya: "Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-amanye m, M ga-eri site na achịcha gị. Ma ọ bụrụ na ị dị njikere inye a ọku, na-enye ya Jehova. "Ma Manoa amaghị na ọ bụ onye mmụọ ozi Jehova.
13:17 O wee sị ya, "Kedu aha gị, ka ọ were, ma ọ bụrụ na okwu gị na-emezu, anyị wee na-asọpụrụ gị?"
13:18 Ọ si ya, "Gịnị mere i ji ajụ m aha, nke bụ a sịkwa?"
13:19 Ya mere, Manoa we were nwa-ewu n'ebe ewu, na libations, na o mere ka ha n'elu oké nkume, dị ka àjà na-nwe-ayi, onye ahụ na-arụpụta ebube. Mgbe ya na nwunye ya nọ na-ele.
13:20 Na mgbe bụ ire ọkụ nke ebe ịchụàjà rịgooro n'eluigwe, Mọ-ozi nke Jehova rigoro nime ire. Na mgbe Manoa na nwunye ya hụrụ nke a, ha we da ewekarị n'ala.
13:21 Mọ-ozi nke Jehova agaghịkwa pụtara n'ihu ha. Ozugbo, Manoa ghọtara ya ịbụ onye na-Angel nke Jehova.
13:22 O we si nwunye-ya, "Anyị ga-anwụ, ebe anyị hụrụ Chineke. "
13:23 Ya na nwunye ya zara ya, "Ọ bụrụ na Chineke chọrọ igbu anyị, ọ ga-nabatara ọku na libations anyị aka. Ọ garaghị kpughere ihe a niile anyị, ma ọ ga-enye anyị gwara anyị ihe ndị na-eme n'ọdịnihu. "
13:24 Na n'ihi ya, ọ mua nwa-nwoke, na ọ kpọrọ aha-Samson. Na nwa na-enweghị toro, na Onyenwe anyị gọzie ya.
13:25 Na Mọ nke Jehova malitere ka ya na ya nọ n'ogige nke Dan, between Zorah and Eshtaol.
14:1 Samsịn rịdata Timna. Na ịhụ na e nwere otu nwaanyị si inyom ndị Filistia,
14:2 O wee, na ọ gwara nna ya na nne ya, si: "M hụ otu nwaanyị na Timna n'ime ụmụ ndị Filistia. M na-arịọ na ị na-ya ka m dị ka nwunye. "
14:3 Na nna-ya na nne ya wee sị ya, "Ọ bụghị a nwaanyị dị n'etiti ụmụ nwaanyị ụmụnna gị, ma ọ bụ n'etiti ihe niile m ndị mmadụ, nke mere na ị ga-adị njikere na-a nwunye na n'aka ndi Filistia, onye na-ebighị úgwù?"Samsịn wee sị nna ya: "Were nwanyị a ka m. N'ihi na ọ di nma n'anya-anya m. "
14:4 Ugbu a nne na nna ya amaghị na ihe e mere site Jehova, na na ọ chọrọ oge megide ndi Filistia. N'ihi na n'oge ahụ, ndi Filistia nwere n'aru Israel.
14:5 Ya mere, Samson rịdata na nna ya na nne Timna. Ma mgbe ha rutere ubi vaịn nke obodo, ọ hụrụ a nwa ọdụm, saveji na-ebigbọ, na ya zutere ya.
14:6 Mmụọ nke Jehova ji ọsọ n'elu Samson, na na ọ dọwara adọwa ọdum, dị ka a nwa ewu a na-adọwa n'ime iberibe, enwe ihe ọ bụla n'aka-ya. Ma ọ bụghị ya chọrọ ikpughere a ka nna ya na nne.
14:7 O wee gbadaa gwa nwanyị ahụ nke mma ya anya.
14:8 Na mgbe ụbọchị ụfọdụ gasịrị, alọta ịlụ ya, o wezugara onwe-ya mere ka ọ hụ na ozu ọdụm. Ma, le, enwere a igweahuhu aṅụ na n'ọnụ ọdụm, na a n'ụgbụgbọ mmanụ aṅụ.
14:9 Na mgbe ọ were ya na aka ya, o rie ya n'ụzọ. Na bịarutere na nna ya na nne, o we nye ha a òkè, na ha na-eri ya. Ma ọ bụ adịghị njikere kpugheere ha na ọ nara na mmanụ aṅụ si ahụ nke ọdụm.
14:10 Ya mere nna-ya, we rida nwaanyị, na o mere a oriri maka nwa-ya Samson. N'ihi na otú ahụ eto eto ndị ikom na-agba nkịtị na-eme.
14:11 Na mgbe ụmụ amaala nke ebe hụrụ ya, ha wetaara ya iri atọ enyi ka ya na ya.
14:12 Samson we si ha: "M ga-gwa Abigel ị a nsogbu, nke, ma ọ bụrụ na ị nwere ike idozi ya maka m n'ime ụbọchị asaa nke oriri, M ga-enye gị iri atọ Chiefs na otu nọmba nke tunics.
14:13 Ma ọ bụrụ na ị na-adịghị ike na-edozi ya, ị ga-enye m iri atọ Chiefs na otu nọmba nke tunics. "Ha zara ya, "Gwa Abigel nsogbu, ka anyị wee na-anụ ya. "
14:14 Na ọ sịrị ha, "Food wee si na nke na-eri, na uto wee si na nke dị ike. "Ma ha enweghị ike dozie uru ruo ụbọchị atọ.
14:15 Na mgbe ụbọchị nke asaa ahụ rutere, ha we si nwunye Samson: "Ịrata gị na di, na ka ya na-ekpughe unu ihe uru n'aka. Ma ọ bụrụ na ị na-adịghị njikere ime otú ahụ, anyị ga-agba gị na ụlọ nna nna gị. Ọ bụ na ị na-akpọ anyị agbamakwụkwọ ka a ga-ebibi anyị?"
14:16 O bere ákwá n'ihu Samson, na o mere mkpesa, si: "Ị kpọrọ m asị, na ị na-ahụ m n'anya. Ọ bụ ya mere ị na-achọghị ka ọ kọwaara m nsogbu, nke ị chọrọ ka ụmụ ndị m. "Ma ọ zara: "Abụghị m njikere ikpughere ya nna m na nne. Ya mere, otú m nwere ike na-ekpughe ya unu?"
14:17 Ya mere, o we kwa ákwá n'iru ya n'ime ụbọchị asaa nke oriri. Na na ogologo, n'ụbọchị nke asaa, ebe ọ nọwo na-enye ya nsogbu, ọ kọwara na ọ. Na ozugbo ọ kpughere ya ya obodo.
14:18 na ha, n'ụbọchị nke asaa, n'ihu anyanwụ jụrụ, sị ya: "Gịnị dị ụtọ karịa mmanụ aṅụ? Gịnịkwa dị ike karịa ọdụm?"O wee sị ha, "Ọ bụrụ na ị na-akọ na m nwa ehi, unu agaraghị ekwuchi m uru. "
14:19 Na otú ahụ ka Mọ nke Jehova ji ọsọ n'elu ya, na rịdata na Ashkelon, na na na ebe o wee gbuo mmadụ iri atọ. Na-ewepụ uwe ha, o nyere ha ka ha na ndị na-edozi nsogbu. Na ịbụ ukwuu iwe, ọ rigoro n'ulo nna-ya.
14:20 Mgbe ya na nwunye ya were dị ka a di otu n'ime ndị enyi ya na agbamakwụkwọ enyi.
15:1 Mgbe ahụ, mgbe oge ụfọdụ, mgbe ụbọchị nke na-ewe ọka wit n'ubi nọ nso, Samson rutere, mbiba ileta nwunye ya, na o mere ya a nwa ewu n'ebe ewu. Na mgbe ọ chọrọ tinye ya ime, ka ọ dị na mbụ, nna ya machibidoro ya, si:
15:2 "Echere m na ị ga-asị ya, ya mere, m nyere ya ka enyi gị. Ma o nwere a nwanne, onye tọrọ na ndị ọzọ mara mma karịa ọ bụ. O nwere ike ịbụ a na nwunye gị, kama nke ya. "
15:3 Na Samson zara ya: "Site na nke a ụbọchị, agaghi-agwu kwa ikpe m megide ndi Filistia. N'ihi na m ga-eme imerụ unu nile ".
15:4 Ọ pua na-ejide na narị atọ nkịta ọhịa. Na o sonyeere ha ọdụ ka ọdụ. O kegide ọwa n'etiti ọdụ.
15:5 Na mwube ndị a na ọkụ, ọ hapụrụ ha, ka ha wee na ọsọ si ebe ruo ebe. Na ozugbo ha wee banye ubi ọka ndị Filistia, mwube ndị a na ọkụ, ma ọka na-ama ama-aga na-ebu, na ihe ka guzo na stalk. Ndị a na-kpam kpam ọkụ, nke mere na ire ọkụ na-erepịa ọbụna ubi vaịn na ubi oliv.
15:6 Ndi Filistia we si, "Ònye mere ihe a?"Ma a sịrị: "Samson, nwa na-iwu nke Timnite, n'ihi na o wepu ya na nwunye, ma nye ya ọzọ. O mere ihe ndị a. "Ma ndi Filistia we rigo, sure nwaanyị nakwa dị ka nna ya.
15:7 Samson we si ha, "Ọ bụ ezie na i mere ihe a, M ka ga na-emezu ịbọ ọbọ megide gị, na mgbe ahụ, m ga-jụụ. "
15:8 O wee wakpo ha na a ezigbo egbu, nke mere na, nke iju-anya, ha we nwa ehi nke ụkwụ n'elu apata. na-agbadata, o biri n'ọgba nke oké nkume Itam.
15:9 Na ndi Filistia, arịgo n'ime n'ala Juda, mere mara ụlọikwuu na ebe ahu nke e mesịrị kpọọ Lihaị, nke ahụ bụ, ọkpụkpụ agba, ebe-agha-ha gbasaa.
15:10 Na ụfọdụ ndị si n'ebo Juda we si ha, "Gịnị mere i rigoro imegide ayi?"Ha zara, "Anyị na-na-na-eke agbụ Samson, na-akwụghachi ya maka ihe o mere anyị. "
15:11 Mgbe ahụ ka puku mmadụ atọ nke Juda rịdata n'ọgba nke oké nkume Itam. Ha we si Samson: "Ị maara na ndị Filistia na-achị anyị? Gịnị mere ị ga-achọ ime nke a?"O wee sị ha, "Dị ka ha mere ka m, otú ahụ ka m mere ha. "
15:12 Ha we si ya, "Anyị na-na-na-eke agbụ ị, na ịnapụta gị n'aka ndị Filistia. "Samsịn wee sị ha, "Aṅula iyí ma-ekwe nkwa m na ị ga-egbu m."
15:13 ha kwuru, sị: "Anyị agaghị egbu gị. Ma, anyị ga-enyefekwa gị kegide. "Ha kee ya agbụ na abụọ ọhụrụ udọ. Ha we were ya si n'oké nkume na Itam.
15:14 Na mgbe o rutere ebe nke ọkpụkpụ agba, na ndi Filistia, na-eti mkpu mkpu, zutere ya, Mọ nke Jehova ji ọsọ n'elu ya. Na dị nnọọ ka flax na-emekarị, gwusia site a ndumodu nke ọkụ, otú ndị agbatị na nke ọ agbụ gbajiri na wepụtara.
15:15 Na-achọta a ọkpụkpụ agba nke e ebikwasị e, nke ahụ bụ, ọkpụkpụ agba oké ịnyịnya ibu, agụpụta ya, O wee gbuo a puku ndị ikom.
15:16 O wee sị, "Na ọkpụkpụ agba oké ịnyịnya ibu, na agha nke nwa nke a ibu, M ebibi ha, na m kụgbuo otu puku ndị ikom. "
15:17 Na mgbe o dechara ndị a okwu, na-abụ abụ, ọ tụbara ọkpụkpụ agba n'aka ya. Kpọ aha ebe Ramath-Lihaị, nke a sụgharịrị dị ka 'elu nke ọkpụkpụ agba.'
15:18 Na ịbụ nnọọ mmiri na-agụ, O wee tikuo Jehova, o wee sị: "I nyere, n'aka ohu gị, a nnọọ ukwuu nzọpụta na mmeri. Ma na-ahụ na m ga-anwụ n'ihi akpịrị ịkpọ nkụ, n'ihi ya, m ga-adaba n'aka ndị na-ebighị úgwù. "
15:19 Na otú ahụ ka Jehova wee meghee a nnukwu eze na ọkpụkpụ agba nke inyinya-ibu, na mmiri wee si na ya. Na ọ na-aṅụ ya, ya mmụọ agbakee, ọ napụtakwara ike ya. N'ihi nke a, na aha ebe a na-akpọ 'opupu na-akpọ si na ọkpụkpụ agba,'Ọbụna ruo ugbu a.
15:20 Ndien enye ekpe ikpe Israel, n'ubọchi nke ndi Filistia, orú arọ.
16:1 Ọ gakwara Geza. Ọ na-hụrụ a nwaanyị akwụna nwaanyị, na ọ banyere ya.
16:2 Na mgbe ndị Filistia nụrụ nke a, na na ọ ghọrọ ọma mara n'etiti ha, na Samson banyere obodo, ha gbara ya gburugburu, ịtụkwasị nche n'ọnụ ụzọ ámá nke obodo. N'ebe ahụ ka ha nọ na-eche nche abalị dum na-agbachi nkịtị, ka ọ were, n'ụtụtụ, ha wee gbuo ya dị ka ọ na-apụ.
16:3 Ma Samson raru ura ruo n'etiti abalị, na-ebili si n'ebe, O were ma ọnụ ụzọ si n'ọnụ ụzọ ámá, na ha posts na nkpọrọ. Na-ebikwasị ha n'elu ubu ya, o we chiri ha na n'elu ugwu chere ihu n'ebe Hebron.
16:4 Mgbe ihe ndị a, na ọ hụrụ otu nwaanyị bụ onye bi na ndagwurugwu Sorek. Na ọ na-akpọ Delilah.
16:5 Na ndi-isi ndi Filistia we si ya, ha we si: "Eduhiela ya, na ịmụta n'aka ya ebe ina n'ike ya dị ukwuu, na otú anyị ga-enwe ike imeri ya na ịmanye restraints na ya. Ma ọ bụrụ na ị ga-eme nke a, onye ọ bụla n'ime anyị ga-enye gị otu puku na otu narị mkpụrụ ego ọlaọcha. "
16:6 Ya mere, Delilah sị Samsịn, "Gwa m, Ana m arịọ gị, ebe ina gị nnọọ ukwuu ike, na na ihe ndị i nwere ike-agbụ, nke mere na ị nwere ike ghara imebi free?"
16:7 Na Samson zara ya, "Ọ bụrụ na m ga-agbụ na asaa udọ, mere nke akwara ma akọrọ, ma ka na-dee mmiri, M ga-na-adịghị ike dị ka ndị ikom ndị ọzọ. "
16:8 Na ndi-isi nke ndi Filistia weta-ya asaa udọ, dị ka o kwuru. O kee ya agbụ ndị a.
16:9 Ya mere, ndị na-ezo na ndị zoro na ya, na ime, na-atụ anya na ọgwụgwụ nke okwu. Na ọ tikuru ya, "The Filistia dị n'elu ị, Samson!"Ma o mebiri udọ, dị ka onye ga-agbaji a na eri nke flax, gbagọrọ maka ọnwụ na singed site ọkụ. Ya mere na ọ bụghị mara ebe dina ike ya.
16:10 Na Delilah si ya: "Lee, ị kwara emo m, na i kwuru a ụgha. Ma ọ dịkarịa ala ugbu a, gwa m ihe i nwere ike-agbụ. "
16:11 Ọ si ya, "Ọ bụrụ na m ga-agbụ na ọhụrụ udọ, nke mgbe e ji mee ihe, M ga-adịghị ike na dị ka ndị ikom ndị ọzọ. "
16:12 Ọzọ, Delilah kee ya ndị a, na ọ tikuru, "The Filistia dị n'elu ị, Samson!"N'ihi na ihe nēru nbì a kwadebere na ime. Ma o mebiri ihe bindings ka filaments nke a web.
16:13 Na Delilah gwa ya okwu ọzọ: "Olee mgbe ị ga-ghọgbuo m na-agwa m okwu ụgha? Ikpughe na ihe ị kwesịrị ịdị na-agbụ. "Ndien Samson zara ya, "Ọ bụrụ na ị ikpa asaa akpọchi isi m na onye na-ekwe, na ọ bụrụ na ị tie ndị a gburugburu a ọgọ na idozi ya n'ala, M ga-adịghị ike. "
16:14 Na mgbe Delilah mere nke a, O wee sị ya, "The Filistia dị n'elu ị, Samson. "Ma ịda site ụra, ọ kagburu ọgọ na ntutu na ákwà.
16:15 Na Delilah si ya: "Olee otú ị na-ekwu na ị hụrụ m n'anya, mgbe mkpụrụ obi gị adịghị n'ebe m nọ? Ị ghara ụgha ka m ugboro atọ, na ị na-adịghị njikere na-ekpughe ebe ina gị nnọọ ukwuu n'ike. "
16:16 Na mgbe ọ nọwo na nnọọ nsogbu ya, na-elekọta ọtụtụ ụbọchị na-nọrọ nso, ka o wee ghara oge izu ike, mkpụrụ obi ya bụ ifenti, na ọ bụ ike gwụrụ, rue ọnwu.
16:17 Mgbe ahụ igosipụta eziokwu nke okwu, O wee sị ya: "Iron mgbe a haziri gafee isi m, n'ihi na abụ m onye Naziraịt, nke ahụ bụ, M na a na-nsọ Chineke si m n'afọ nne. Ọ bụrụ na m na isi m ga-akpụchasị, ike m ga-apụ m, na m ga-nāda # mbà na ga-adị ka ndị ikom ndị ọzọ. "
16:18 Mgbe ahụ, ịhụ na o ekwupụtaara ya ya dum na mkpụrụ obi, ọ zigara ndi-isi ndi Filistia, na iwu: "Gbagote nanị otu ugboro ọzọ. N'ihi na ugbu a, ọ meghere obi ya m. "Ha wee ruo, na-ewere na ha na-ego na ha kwere nkwa na.
16:19 Ma o mere ya na-ehi ụra n'ikpere ya, , nọdụ ala rie isi ya n'elu ya n'obi. Ọ we kpọ a na-akpụ isi, na ọ kpụrụ ya asaa akpọchi nke ntutu. O wee na-asọ ya, na ichughachiazu ya si onwe ya. N'ihi na ozugbo ike ya wee si na ya.
16:20 Ọ si, "The Filistia dị n'elu ị, Samson!"Ma awaking n'ụra, ọ sịrị na ya n'uche, "M ga-agbaji pụọ wee gbụrụ onwe m, dị nnọọ ka m mere tupu. "N'ihi na ọ na-amaghị na Jehova napụrụ ya.
16:21 Na mgbe ndị Filistia jidere ya, ha ozugbo fopụrụ anya ya. Ndien mmọ ẹda enye, kee n'agbụ, Geza. Na gbaa ya na a n'ụlọ mkpọrọ, ha wee mee ya na-arụ ọrụ a nkume igwe nri.
16:22 Na ugbu a ya ntutu isi malitere na-eto eto azụ.
16:23 Na ndi-isi ndi Filistia kpọkọrọ dị ka otu, ka ha wee na-enye nnukwu àjà Degọn, chi ha. Ha feasted, si, "Chineke anyị napụtara onye iro anyị, Samson, n'aka anyị. "
16:24 Mgbe ahụ, kwa, ndị, hụrụ nke a,, toro chi ha, ha we si otu, "Chineke anyị napụtara anyị mmegide n'ime anyị aka: onye-ebibi ala anyị na ndị gburu nnọọ ọtụtụ. "
16:25 Na-aṅụrị ọṅụ ha usọrọ, enwe ugbu a weere nri, ha ntụziaka ka Samson na-akpọ, na na ọ ga-akwa emo n'iru ha. Na ebe e si n'ụlọ mkpọrọ, ọ akwa emo n'iru ha. Na ha mere ka o guzo n'agbata ogidi abụọ.
16:26 Ọ si nwa-okoro nọ na-edu ya nzọụkwụ, "Hapụ m ka m na-emetụ ndị na ogidi, nke na-akwado ndị ezinụlọ dum, na ịdabere megide ha, ka m wee zuo ike a nta. "
16:27 Ma ụlọ ahụ jupụtara ná ndị ikom na ndị inyom. Na ndị isi niile nke ndị Filistia bụ e, nakwa dị ka ihe puku mmadụ atọ, nke ma sexes, n'elu ụlọ na nke elu nke ulo, ndị na-ekiri Samson na-akwa emo.
16:28 Mgbe ahụ, akpọku Chineke, o kwuru, sị, "Chineke Onyenwe anyị cheta m, ma nyeghachi m ugbu a m na mbụ ike, Chineke m, ka m wee ọbọ onwe m megide ndị iro m, na nke mere na m nwere ike inweta otu ọbọ maka ịnọ n'ụkọ n'ime anya m abụọ. "
16:29 Na nke jidere ma ogidi, na nke ụlọ zuru, na-ejide otu na aka nri ya na ndị ọzọ na-ekpe-ya,
16:30 o kwuru, sị, "Ka m ndụ anwụ na ndị Filistia." Ma, mgbe ọ maa jijiji ogidi ike, ụlọ ahụ, dara n'elu isi niile, na ndi fọduru nke ìgwè bụ ndị nọ n'ebe. Na o gburu ọtụtụ ndị ọzọ na ọnwụ ya karịa o gburu n'ihu ná ndụ ya.
16:31 Mgbe ụmụnne ya na ndị ikwu ya nile, agbada, būru ozu-ya, ha we lìe ya n'etiti Zọra na Eshtaol, na-eli n'ọnọdu nna-ya, Manoa. Ndien enye ekpe ikpe Israel ke isua edịp.
17:1 Na na oge, e nwere otu nwoke, site n'ugwu Efraim, aha ya bụ Maịka.
17:2 Ọ si nne-ya, "The otu puku na otu narị mkpụrụ ego ọlaọcha, nke i iche maka onwe gị, na banyere nke ị ṅụrụ iyi na m na-anụ, le, M nwere ha, na ha na m. "O wee zaa ya, "My nwa a gọziri agọzi nke Jehova."
17:3 Ya mere, ọ weghachiri ha nye nne-ya. O wee sị ya: "M na-na-nsọ na kwe a silver Jehova, nke mere na nwa m ga-enweta ya n'aka m, ma ga-eme a arụsị a wụrụ awụ na a pịrị image. Na ugbu a m na-anapụta ya unu. "
17:4 Na mgbe ọ weghachiri ndị a ka nne-ya, O we were ọgu nke mkpụrụ ego ọlaọcha, na ọ nye ha ọlaọcha, ka o wee na-eme ka ha a arụsị a wụrụ awụ na a pịrị image. Ọ bụ na ulo Micah.
17:5 O nwekwara iche na ya obere okpukpe Shinto maka chi. O we me ephod na theraphim, nke ahụ bụ, a nchụàjà uwe na arụsị. O jupụtara n'aka otu n'ime ụmụ ya, o we ghọrọ ya nchụàjà.
17:6 N'ụbọchị ndị, e nweghị eze n'Izrel. Kama, onye ọ bụla mere ihe ziri ezi n'anya ya onwe ya.
17:7 Ọzọkwa, e nwere onye ọzọ na-eto eto nwoke, si Betlehem nke Juda, otu n'ime ndị ikwu ya. Na ya onwe ya bụ a Levite, na o bi n'ebe.
17:8 Mgbe ahụ, si obodo Bethlehem, ọ chọrọ inọ dika ọbìa ebe ọ bụla ọ ga-ahụ na ọ bara uru onwe ya. Na mgbe o rutere ugwu Efraim, mgbe na-eme njem, o wezugara onwe-ruo nwa oge ka ụlọ Micah.
17:9 Na a gwara ya site na ya ebe o si. Na o mere: "Abụ m onye Livaị si Betlehem nke Juda. Na m na-eje ka m wee na-ebi ebe m ike, ma ọ bụrụ na m na-aghọta na ọ ga-bara uru ka m. "
17:10 Maika we si: "Nọnyere m. Na unu ga-m dị ka a nne na nna na onye nchụàjà. Na m ga-enye gị, kwa afọ, iri mkpụrụ ego ọlaọcha, na a abụọ-yikwasịkwara uwe, na ihe ọ bụla ihe oriri dị mkpa. "
17:11 o kwetara, o wee nọrọ na nwoke. Na ọ bụ ya ka otu n'ime ụmụ ya.
17:12 Na Micah jupụtara aka ya, na o nwere nwa okorobịa ya na ya dị ka ya nchụàjà,
17:13 si: "Ugbu a, m maara na Chineke ga-adị mma ka m, ebe m nwere a oku site na ngwaahịa nke ndị Livaị. "
18:1 N'ụbọchị ndị, e nweghị eze n'Izrel. Na ebo Dan chọrọ a onwunwe maka onwe ha, ka ha wee na-ebi na ya. N'ihi na ọbụna na ụbọchị, na ha natara ha ọtụtụ n'etiti ebo ndị nke ọzọ.
18:2 Ya mere, umu Dan we ziga ise nnọọ ike mmadụ, nke ha ngwaahịa na ndị ezinụlọ, si Zọra na Eshtaol, ka ha wee na-amụ ala na ịdị uchu na inyocha ya. Ha we si ha, "Gaa, ma tụlee ala ahụ. "Mgbe na-eme njem, ha bịarutere n'ugwu Efraim, ha wee banye n'ime ụlọ Micah. N'ebe ahụ, ha zuru ike.
18:3 Na ha ghọtara okwu nke na-eto eto bụ onye a Levite. Na mgbe na-eji nke ufọkisen na ya, Ha wee sị ya: "Ònye ka unu ebe a? Kedu ihe ị na-eme ebe a? Gịnị mere na ị chọrọ na-abịa ebe a?"
18:4 O we za ha, "Micah enyewo m otu ihe ma na ọzọ, na enye kwụrụ m ụgwọ ọrụ, nke mere na m nwere ike ịbụ ya onye nchụàjà. "
18:5 Mgbe ahụ, ha rịọrọ ya ka ịkpọ Chineke, ka ha wee na-enwe ike ịmata ma na njem ha malitere ga-abụ ọgaranya, na ma okwu ga-eme nke ọma.
18:6 Na ọ na-anabata ha, "Gaa n'udo. Jehova anya na amara gị ụzọ, na na njem ka i si na-eme. "
18:7 Na otú ahụ ka ndị ikom ise, na-aga na, rutere Laish. Na ha hụrụ ndị, bi na ya na-enweghị ihe ọ bụla egwu, dị ka omenala ndị Saịdọn, ala na udo, enwe na o siri ike na onye ọ bụla na-emegide ha, na oké akụ na ụba, ma dị ndụ iche iche, anya n'ebe Sidon na madu nile.
18:8 Na ha laghachiri ha na ụmụnne ha na Zora na Eshtaol, na-agbagha ha dị ka ihe ha mere. Ha zaghachikwara:
18:9 "Bilie. Ka anyị lagoro ha. N'ihi na anyị hụrụ na ala bụ nnọọ ọgaranya na-amị mkpụrụ. Egbula oge; adịghị ezere. Ka anyị pụọ na inweta ya. A ga-enweghị isi ike.
18:10 Anyị ga tinye ndị bi na ntukwasi-obi, na a sara mbara nke ukwuu na mpaghara, na Jehova ga-anapụta ebe anyị, a ebe ọ dịghị enweghị ihe ọ bụla nke na-eto n'elu ụwa. "
18:11 Ya mere, ndị nke ikwu nke Dan setịpụrụ, nke ahụ bụ, narị ndị ikom isii si Zọra na Eshtaol, ra ihe-agha nke agha.
18:12 Ma na-aga elu, ha nọrọ na Kiriat-jearim Juda. Na ebe, site na mgbe, nwetara aha ahụ Camp nke Dan, na na ọ bụ n'azụ azụ nke Kiriat-jearim.
18:13 site n'ebe, ha gabiga rue ugwu Efraim. Ma mgbe ha rutere n'ụlọ Maịka,
18:14 ndị ikom ise na, onye tupu e zigara tụlee ala Laish, kwuru ka ndị fọdụrụ n'ime ụmụnne ha: "Unu maara na ndị a ụlọ na e nwere onye ephod na theraphim, na a arụsị a wụrụ awụ na a pịrị image. Tụlee ihe o nwere ike ime ka ị na-eme. "
18:15 Ma mgbe ha we wezuga onwe-a obere, ha banyere n'ụlọ ndị Levite nwata, bụ onye na-ulo Micah. Na ha kelere ya na okwu udo.
18:16 Ugbu a narị ndị ikom isii, onye na-niile na-ebu, guzo n'ihu ọnụ ụzọ.
18:17 Ma ndị na-banyere ụlọ ndị na-eto eto gbalịsiri ike wepụ ya arusi apiri api, na ephod, na theraphim, na arụsị a wụrụ awụ. Ma onye nchụàjà guzo n'ihu ọnụ ụzọ, na narị isii nnọọ ike ndị na-echere bụghị n'ebe dị anya.
18:18 Ya mere, ndị banyere wepuru apiri api, na ephod, na theraphim, na arụsị a wụrụ awụ. Na onye nchụàjà wee gwa ha, "Kedu ihe ị na-eme?"
18:19 Ha zara ya: "Mechie ọnụ na-edebe gị na mkpịsị aka gị ọnụ. Na-eso anyị, nke mere na anyị nwere ike ị dị ka nna nakwa dị ka a nchụàjà. N'ihi na nke dị mma ka ị: na-a onye nchụàjà n'ụlọ otu nwoke, ma ọ bụ n'otu ebo na ezinụlọ Israel?"
18:20 Na mgbe ọ nụrụ nke a, o kwetara ka ha okwu. O we were ephod, na arụsị, na arusi apiri api, na ọ malitere na ha.
18:21 Na mgbe na-eme njem, ha we ziga umu, na anu-ulo, na ihe niile dị oké ọnụ ahịa na-aga n'ihu ha.
18:22 Ma mgbe ha nọ n'ebe dị n'ụlọ Maịka, ndị bi na ulo nile nke Micah, na-eti mkpu ọnụ, soro ha.
18:23 Ha wee malite iti mkpu n'azụ ha Akwadoo. Ma mgbe ha anya azụ, ha we si Micah: "Kedu ihe ị chọrọ? Gịnị mere unu ji na-eti mkpu?"
18:24 Na o mere: "Ị ewepuwom chi m, nke m mere onwe m, onye nchụàjà, na ihe nile m nwere. Na-eme ị na-ekwu, 'Gịnị ka ọ bụ na ị chọrọ?'"
18:25 Ụmụ Dan wee sị ya, "Lezie anya ka ị na-adịkwaghị anyị okwu, ma ndị ikom a n'uche maka ime ihe ike pụrụ irikpu gị, gị onwe gị ga-ala n'iyi na ihe niile dị n'ụlọ gị. "
18:26 Ya mere, ha wee na njem na nke ha malitere. ma, Maịka, ịhụ na ha bụ ndị siri ike karịa ya, laghachi n'ulo-ya.
18:27 Ugbu a narị ndị ikom isii were onye nchụàjà, na ihe ndị anyị kwuru n'elu, ha wee na-nwoke Laish, ka a ndị mmadụ nkịtị na ala, na ha gbuo ha were ọnu mma-agha. Na ha gbaa obodo ahụ ọkụ ọkụ.
18:28 N'ihi na ọ dịghị onye na niile zitere reinforcements, n'ihi na ha biri n'ebe dị anya site na Zaidon, na ha enweghị mkpakọrịta ma ọ bụ azụmahịa na onye ọ bụla. Ugbu a, obodo ahụ nsogbu ke n'ógbè Rehob. Na-ewu ya ọzọ, ha biri na ya,
18:29 akpọ aha obodo Dan, dị ka aha nke nna-ha, ndị a mụrụ nke Israel, ezie na tupu ya a na-akpọ Laish.
18:30 Na ha guzosie ike onwe ha arusi apiri api. Jonatan, nwa Giashon, nwa Moses, ya na ụmụ ya, ndị nchụàjà na ebo Dan, ọbụna ruo ụbọchị ha n'agha.
18:31 Na arụsị nke Micah nọgidere na ha n'oge dum oge na ulo Chineke dị na Shailo,. N'ụbọchị ndị, e nweghị eze n'Izrel.
19:1 E nwere otu nwoke, a Levite, bi n'akụkụ ugwu Efraim, onye luru nwunye sitere Bethlehem Juda.
19:2 Ọ hapụrụ ya, na ọ laghachiri n'ụlọ nna ya na Betlehem. Na ọ nọrọ ọnwa anọ.
19:3 Ya na di ya soro ya, N'ịchọ ka ná mma na ya, na ikwu okwu obiọma ya, na-edu ya azụ na ya. Na o nwere ya na ya a ohu na abụọ ịnyịnya ibu. Na ọ natara ya, me ka ọ ba n'ulo nna-ya. Na mgbe nna ya na-na-iwu na-anụ banyere nke a, na hụrụ ya, o zutere ya ọṅụ.
19:4 Na ọ nabatara nwoke. Na nwa na-na-iwu na-anọ n'ụlọ nna ya na-na-iwu ruo ụbọchị atọ, na-eri, na-aṅụ ya dị ka enyi.
19:5 Ma n'ubọchi nke-anọ, ịda n'abalị, ọ bu n'obi setịpụrụ. Ma nna-ya-in-iwu jide ya, o wee sị ya, "Akpa nụrụ ụtọ a obere nri, na ike gị afo, mgbe ahụ ị ga-esi. "
19:6 Ha we nọdu ala ọnụ, na ha wee rie, ṅụọkwa. Ma nna nwa agbọghọ ahụ wee sị nwa ya na-na-iwu, "M na-arịọ gị aka ịnọgide na ebe a taa, ka anyị wee na-aṅụrị ọṅụ ọnụ. "
19:7 Ma na-ebili, ọ bu n'obi na-amalite setịpụrụ. ma ka o sina, nna ya na-na-iwu rugide ya mkpebi, ma mee ya nọgide na ya.
19:8 Ma mgbe ụtụtụ wee, Levi na-akwadebe maka njem ya. Ma nna-ya-in-iwu si ya ọzọ, "M na-arịọ gị ka i lee a obere nri, na a ga-ike, ruo mgbe ìhè na-abawanye, na mgbe na, ị ga-esi. "Ya mere,, ha riri ọnụ.
19:9 Na nwa-okorọbia bilie, ka o wee na-eme njem ya na nwunye ya na-eje ozi. Ma nna-ya-in-iwu gwa ya okwu ọzọ: "Tụlee na ìhè na-adalata, na na ọ na-eru nso n'ebe mgbede. Nọgide na m taa, na-anọ ụbọchị ọṅụ. Na echi ị ga-esi, ka unu wee na-aga n'ụlọ gị. "
19:10 Ya nwa-iwu inyịmeke na-ekweta okwu ya. Kama, enye ozugbo wee na-, na ọ bịarutere abụghị Jebus, nke aha ọzọ a na-akpọ Jerusalem, eduga na ya abụọ na inyinya-ibu na-ebu ibu arọ, na nwunye ya.
19:11 Na ugbu a, ha nọ nso Jebus, ma ụbọchị na-atụgharị n'ime abalị. Orù ahu we si onyenwe ya, "Bịanụ, Ana m arịọ gị, ka anyị banye n'obodo ndi Jebus, ka anyị wee chọta arahụ na ya. "
19:12 Onyenwe ya zara ya: "M ga-agaghị abanye n'obodo a mba ọzọ ndị mmadụ, ndị na-adịghị nke umu Israel. Kama, M ga-agafe n'ebe dị anya dị ka Gibea.
19:13 Ma mgbe m ga-abịa ebe ahụ, anyị ga-ebi na ebe, ma ọ bụ ọ dịghị ihe ọzọ, n'obodo Ramah. "
19:14 Ya mere, ha na-agafe Jebus, na aka iso on, ha malitere njem. Ma, anyanwụ, we rida na ha mgbe ha nọ nso Gibea, nke bụ nke ebo Benjamin.
19:15 Ya mere, ha dọpụ ya, ka ha wee na-ebi n'ebe. Na mgbe ha rutere, ha nọ ala na n'amá nke obodo. N'ihi na ọ dịghị onye dị njikere inye ha ọbịa.
19:16 Ma, le, ha hụrụ otu agadi nwoke, alọta n'ubi si ọrụ ya na mgbede, na ọ bụ site kwa n'ugwu Efraim, na o bi dị ka onye ala ọzọ na Gibea. N'ihi na ndikom nke na mpaghara bụ ụmụ nke Benjamin.
19:17 Na agadi nwoke, eweli anya ya, hụrụ nwoke ọdụ na ya n'ùkwù n'ùkwù na n'amá nke obodo. O wee sị ya: "Olee ebe i si bia? Na ebe ị na-aga?"
19:18 Ọ zara ya: "Anyị si na Betlehem nke Juda, na anyị na-ejegharị ejegharị na-anyị onwe anyị ebe, nke dị n'akụkụ ugwu Efraim. Si n'ebe anyị gara Bethlehem, na ugbu a anyị na-aga ulo Chineke. Ma ọ dịghị onye dị njikere ịnabata anyị n'okpuru ya n'elu ụlọ.
19:19 Anyị nwere okporo ọka * ma hay ka nri ịnyịnya ibu, ma na anyị nwere achịcha na mmanya maka ojiji nke onwe m, na maka orù-gi nwayi na orù bụ onye nọnyeere m. Anyị enweghị ihe ọ bụla ma e wezụga ebe obibi. "
19:20 Na agadi nwoke zara ya: "Udo dịrị gị. M ga-enye ihe dị mkpa. naanị, Ana m arịọ gị, na-na-agaghị anọ n'okporo ámá. "
19:21 O duuru ya n'ime ụlọ ya, o nyekwara ya inyinya-ibu. Ma mgbe ha saa ụkwụ ha, ọ natara ha na a oriri.
19:22 Na mgbe ha na-eri oriri, na na-enye ume ọhụrụ ahụ ha na nri na ihe ọṅụṅụ mgbe oru nke njem, ndikom obodo, umu Belial (nke ahụ bụ, enweghị yoke), bịara na gburugburu ochie ụlọ nwoke. Ha wee malite ịkụ aka n'ọnụ ụzọ, akpọ ka onyenwe nke ulo, na-ekwu, "Kpọpụta ndị nwoke banyere gị ụlọ, nke mere na anyị nwere ike eme ihe n'ụzọ na ya. "
19:23 Na agadi nwoke wee si na ha, o wee sị: "Unu họrọ, ụmụnna, adịghị ahọrọ ime ka ihe ọjọ a. N'ihi na nwoke a batara m ile ọbịa. Ị ga-akwụsị a nzuzu.
19:24 M nwere a-amaghị nwoke, na nwoke a nwere a mate. M ga-eduga ha ka ị, ka unu wee debase ha na ike afọ ju gị abịa. naanị, Ana m arịọ gị, akwala mpụ a megide uwa na mmadụ. "
19:25 Ma ha na-adịghị njikere na-ekweta okwu ya. Nwoke, nghọta nke a, duru ya mate ha, o nyefere ya ka ha n'ụzọ mmekọahụ. Ma mgbe ha na-emegbu ya maka abalị dum, ha wepụtara ya ụtụtụ.
19:26 Ma nwaanyị, dị ka ọchịchịrị na-receding, bịara n'ụlọ nke ulo, ebe ya onyenwe ya na-anọ, na e ọ dara n'ala.
19:27 Mgbe ụtụtụ wee, nwoke bilie, o meghere ụzọ, ka o we mezue njem na ọ malitewo. Ma, le, nwunye ya dina n'ihu ụzọ, na ya aka iru eru na nbata.
19:28 o, na-eche echiche na ọ na-ezu ike, si ya, "Bilie, na ka anyị na-eje ije. "Ma, ebe ọ nyere dịghị omume, n'amaghị na ọ nwụrụ, O were ya elu, o wee bikwasị ya na ya inyinya-ibu, o we laghachi n'ulo-ya.
19:29 Na mgbe o rutere, o wee a mma-agha, o bee n'ime iberibe ozu ahụ nke nwunye ya, na ya ọkpụkpụ, n'ime iri na abụọ akụkụ. Na o zitere iberibe n'ime akụkụ ahụ niile nke Israel.
19:30 Na mgbe onye ọ bụla hụrụ nke a, ha na-eti mkpu ọnụ, "Ọ dịbeghị mgbe ihe dị otú ahụ e mere Israel, site n'ubọchi nna anyị hà rigoro si Egypt, ọbụna ruo ugbu oge. Ka a ikpe na-ada ka anyị na-ekpebi ihe na-emekarị ihe e kwesịrị ime. "
20:1 Na umu-ndikom nile nke Israel we si ka otu onye, malite na Dan ruo Bia-sheba, na ala Gilead, na ha zukọtara, n'ihu Jehova, na Mizpa.
20:2 Na niile isi nke ndị, na ebo niile nke Israel, kpọkọrọ dị ka mgbakọ nke ndị Chineke, anọ narị puku ụkwụ aga agha.
20:3 (Ma, ọ e zonahụghị ụmụ Benjamin na ụmụ Izrel rịgoro Mizpa.) Na onye Livaị, di nke nwaanyị onye e gburu, a ajụjụ dị ka otú oké a mpụ e eme,
20:4 zara: "M gara Gibea Benjamin, na nwunye m, na m dọpụ ebe.
20:5 Ma, le, ndikom obodo, n'abalị, gbara ụlọ ahụ gburugburu nke m na-anọ, mbiba igbu m. Na ha na-emegbu nwunye m na otú ahụ dị ịrịba iwe nke agụụ ihe ọjọọ na na ọgwụgwụ ọ nwụrụ.
20:6 Ma na-ewere ya elu, M bee ya n'ime iberibe, na m zitere akụkụ n'ime ókè niile nke ihe nketa gị. N'ihi na mgbe n'ihu dị otú ahụ a nefarious mpụ, na nmehie uku, mere na Israel.
20:7 Na unu niile bịara ebe a, O ụmụ Izrel. Ghọta ihe i kwesịrị ime. "
20:8 Na ndị niile, eguzo, zara dị ka ma ọ bụrụ na okwu nke otu onye: "Anyị agaghị alaghachi anyị n'ụlọikwuu, ma ọ ga-onye ọ bụla na-abanye n'ime ụlọ ya.
20:9 Ma nke a anyị ga-eme ihe na-emekarị megide Gibea:
20:10 Anyị ga họrọ mmadụ iri n'ime otu narị si n'ebo niile nke Israel, na otu narị n'ime otu puku, na otu puku n'ime puku mmadụ iri, nke mere na ha nwere ike ibufe onunu maka agha, na nke mere na anyị ga-enwe ike ibuso Gibea Benjamin, na-akwụghachi ya maka ya mpụ ka okwesiri. "
20:11 Na niile nke Israel kpọkọrọ megide obodo, dị ka otu onye, na otu uche na onye ndụmọdụ.
20:12 Na ha zigaara dum ebo Benjamin, bụ onye sịrị: "Gịnị mere oké a ajọ omume a hụrụ n'etiti unu?
20:13 Anapụta ndị nke Gibea, ndị eme nke a deplorable emume, nke mere na ha nwere ike ịnwụ, na nke mere na ihe ọjọọ nwere ike-anapụ Israel. "Ha na-adịghị njikere na-ege ntị iwu nke ha na ụmụnne ha, ụmụ Izrel.
20:14 Kama, nke niile obodo ndị ha ọtụtụ, ha kpọkọrọ na Gibea, ka ha wee na-eme ka ha aka, na ka ha wee na-alụso ọgụ megide dum ndị Israel.
20:15 Ndien ẹkụt si Benjamin iri-na-ise na puku ndị na-ebu mma-agha, wezụga bi Gibea,
20:16 bụ ndị na narị asaa ike ikom, alụ ọgụ na n'aka-ekpe nakwa n'aka nri, na nēfe nkume èbè ya n'ụzọ ziri ezi na ha bụ ndị ike tie ọbụna a ntutu, na ụzọ nke nkume ga ọlị uche na ma akụkụ.
20:17 mgbe ahụ kwa, n'etiti ndikom Israel iche n'ebe ụmụ Benjamin, e hụrụ anọ narị puku ndị na-ebu mma agha na ndị na-kwadebere maka agha.
20:18 Ha we bilie, je ulo Chineke, nke ahụ bụ, Shaịlo. Na ha gakwuuru Chineke, ha we si, "Ònye ga-abụ, anyị agha, nke mbụ na-alụso ọgụ megide ụmụ Benjamin?"Jehova zara ha, "Ka Juda gị onye ndú."
20:19 Ozugbo ahụ, ụmụ Izrel, ebili ụtụtụ, mara ụlọikwuu n'ebe dị nso Gibea.
20:20 Na mwube si n'ebe ibuso Benjamin, ha malitere wakpo obodo.
20:21 Ụmụ Benjamin, na-apụ apụ Gibea, gburu puku mmadụ iri abụọ ndị si n'ebe ụmụ Israel, n'ụbọchị ahụ.
20:22 Ọzọ ụmụ Izrel, na-atụkwasị ma ume ma nọmba, setịpụrụ ndị agha ha ka, na otu ebe ebe ha arụwo ụka tupu.
20:23 Ma mbụ ha na-we rigo, kwa ákwá n'iru Jehova, ọbụna ruo mgbe abalị. Na ha gakwuuru ya, sị, "M Kwesịrị anọgide na-aga pụta, ka ọgụ megide ụmụ Benjamin, ụmụnna m, ma ọ bụ ọ bụghị?"O zara ha, "Rigo megide ha, na ibido na-alụ. "
20:24 Ma mgbe ụmụ Izrel nọgidere na-eme agha megide ụmụ Benjamin na-esote ụbọchị,
20:25 ụmụ Benjamin fewe wee si n'ọnụ ụzọ ámá nke Gibea. Na nzuko ha, ha mere dị otú ahụ a frenzied egbu megide ha na ha wee gbuo iri na asatọ puku ndị ikom ndị na-ebu mma-agha.
20:26 N'ihi ya, ụmụ niile Israel gara n'ụlọ nke Chineke, nọdụ ala, ha ákwá n'iru Jehova. Na ha buru ọnụ na ụbọchị ruo mgbede, na ha na-enye ya ọku na tara nke àjà-udo.
20:27 Ha jụrụ ajụjụ banyere ha ala. N'oge ahụ, na igbe + ọgbụgba ndụ nke Jehova ọ ka nọ n'ebe.
20:28 Finehas, nwa Eleeza, nwa Eron,, ahụ bụ nke mbụ onye-ndú ulo. Ya mere, ha gakwuuru Jehova, ha we si, "Ọ bụ anyị ka na-aga pụta agha megide ụmụ Benjamin, anyị na ụmụnna anyị, ma ọ bụ ka anyị kwesịrị kwusi?"Ma Jehova sịrị ha: "Rigo. n'ihi na echi, M ga-anapụta ha n'aka gị. "
20:29 Ụmụ Israel guzo nēru nbì gburugburu obodo nke Gibea.
20:30 Ha we me ka ha agha megide Benjamin a atọ, dị nnọọ ka ha mere na mbụ na nke abụọ ugboro.
20:31 Ma ụmụ Benjamin ọzọ fewe wee n'atụghị egwu si n'obodo. Ma ebe ọ bụ ndị iro ha nọ na-agbapụ, ha we chua ha a ogologo ụzọ, ka ha wee na-emerụ ma ọ bụ na-egbu ụfọdụ n'ime ha, dị nnọọ ka ha mere na mbụ na nke abụọ ụbọchị. Ha agbakụtawo abụọ gaa ụzọ, onye na-ezisa ha n'ebe Bethel, na ndị ọzọ n'ebe Gibea. Na ha gbuo banyere mmadụ iri atọ.
20:32 N'ihi na ha chere na ha na-ada ada azụ dị ka ha mere tupu. Ma kama, nkà feigning ụgbọ elu, ha malitere a plan isere ha si obodo, na site na yiri ka ọ gbalaga, na-edu ha tinyere n'elu kwuru ụzọ.
20:33 Na umu-ndikom nile nke Israel, ebili si na ọnọdụ ha, setịpụrụ ndị agha ha ka, n'ebe ahu nke a na-akpọ Baaltamar. N'otu aka ahụ, nēru nbì na encircled obodo malitere, nke nta nke nta, ikpughe onwe ha,
20:34 na-enwe ọganihu n'elu n'ebe ọdịda anyanwụ nke obodo. Ọzọkwa, ọzọ puku ndị ikom iri si niile Israel na-akpali iche a esemokwu na ndị bi n'obodo ahụ. Na agha na-eto arọ megide ụmụ Benjamin. Ha na-aghọta na, n'akụkụ niile nke ha, ọnwụ ya eruwela.
20:35 Ma Jehova gbuo ha n'anya nke umu Israel, na ha egbu, n'ụbọchị ahụ, iri abụọ na ise puku n'ime ha, tinyere otu narị ndị ikom, niile dike na ndị nāmiputa mma-agha.
20:36 Ma ụmụ Benjamin, mgbe ha hụrụ onwe ha dị ka ndị na-adịghị ike, malitere ọsọ. Ụmụ Israel nghọta a, nyere ha ohere na-agba ọsọ, ka ha wee na-abata na uju nēru nbì na kwadebere, nke ha positioned nso obodo.
20:37 Ma mgbe ha biliri mberede si ezo, na ndị nke Benjamin ama agbakụtawo ndị egbutukwala ha, ha wee banye n'ime obodo, ha wee tie ya na ọnu mma-agha.
20:38 Ugbu a ụmụ Izrel nyere ihe ịrịba ama ndị onye ha guzo ke nēru nbì, ka ọ were, mgbe ha weghaara obodo, ha ga na-amụnye ọkụ, na site na anwụrụ ọkụ na-arịgo elu, ha ga-egosi na obodo ahụ weghaara.
20:39 Ọzọkwa, ụmụ Izrel ghọtara ihe ịrịba ama a n'oge agha (ụmụ Benjamin chere na ha wee gbaa ọsọ, ha we chua ha forcefully, igbute iri atọ ndị si agha-ha).
20:40 Na ha hụrụ ihe dị ka ogidi anwụrụ ọkụ na-arịgo site na obodo. N'otu aka ahụ, Benjamin, achọ azụ, ghọtara na obodo ahụ weghaara, maka ọkụ ahụ a na-ebupụ elu.
20:41 Na ndị na-tupu ya asị gbaa ọsọ, mbịne ha ihu, nēguzogide ha ọzọ ike. Na mgbe ụmụ Benjamin hụrụ nke a, ha jụrụ na ụgbọ elu na,
20:42 ha wee malite iso n'iru uzọ ọzara, na mmegide na-achụ ha ka ha na ebe. Ọzọkwa, ndị mụnye ọkụ obodo nwekwara zutere ha.
20:43 N'ihi ya, ọ mere na ha na-egbutu na abụọ site ndị iro, ma ọ bụ n'ebe ọ bụla respite maka anwụ. Ha na e gburu wee gbuo n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke obodo nke Gibea.
20:44 Ugbu a ndị na-egbu ahụ n'otu ebe iri na asatọ puku ndị ikom, niile dị nnọọ siri ike alụso.
20:45 Na mgbe ndị fọdụrụ nke Benjamin hụrụ nke a, ha wee gbaga n'ala ịkpa. Na ha na-ejegharị ejegharị n'ebe nkume nke a na-akpọ na Rimon. Na na ụgbọ elu na-, n'etiti ndị na-na-agbasasị dị iche iche ntụziaka, ha gbuo puku ndị ikom ise. Ma ọ bụ ezie na ha gbasasịa niile ọzọ, ha wee na-achụ ha ọsọ, na mgbe ahụ, ha nwua ọzọ abụọ na puku abụọ.
20:46 Na otú o mere na ihe niile nke ndị e gburu site na Benjamin, dị iche iche ebe, iri abụọ na puku mmadụ ise alụso, nnọọ njikere ịga agha.
20:47 Na otú e nwere nọrọ site dum ọnụ ọgụgụ nke Benjamin narị ndị ikom isii, bụ ndị ike ịgbanahụ na ya gbaba n'ime wilderness. Na ha biri na nkume nke na Rimon, ọnwa anọ.
20:48 Ma ụmụ Israel, alọta, okowotde na mma-agha nile nke fọduru n'obodo, si n'aka mmadụ ọbụna na-ehi. Na obodo niile dị na obodo nta nke Benjamin gwusiri na-eripịarịta ọkụ.
21:1 The ụmụ Izrel ewerewokwa iyi na Mizpa, ha we si, "Ọ dịghị onye n'ime anyị ga-enye ụmụ ya ndị inyom ka ọ bụrụ nwunye ụmụ Benjamin."
21:2 Ma ha niile gara n'ụlọ Chineke na Shaịlo. Na ọdụ n'anya-ya ruo mgbede, ha we welie olu-ha, ha wee malite ịkwa ákwá, na a oké ákwá arịrị nke, si,
21:3 "Gịnị mere, O nwe-ayi, Chineke nke Israel, ka ihe ọjọ a mere n'etiti ndị gị, nke mere na a ụbọchị otu ebo ga-anapụ anyị?"
21:4 Mgbe ahụ, na-ebili na mbụ ìhè na-esote ụbọchị, ha wuru ebe ịchụàjà. Ha we surere ọku na tara nke àjà-udo n'ebe ahu, ha we si,
21:5 "Ònye, nke ebo nile nke Israel, arịgoghị na ndị agha nke Jehova?"N'ihi na ha jikọta onwe ha na a oké iyi, mgbe ha nọ na Mizpa, na onye ọ bụla na-adịghị ga-gburu.
21:6 Ụmụ Israel, ebe e mere ka nchegharị n'ihi nwanne ha nwoke Benjamin, malitere ịsị: "Otu ebo ka e wepụwo Israel.
21:7 Si ebe ha ga-enweta nwunye? N'ihi na anyị niile ṅụrụ iyi na nkịtị na anyị agaghị na-enye anyị ndị inyom ka ha. "
21:8 N'ihi nke a, ha kwuru, "Ònye, nke ebo nile nke Israel, na arịgoghị Jehova na Mizpa?"Ma, le, ndị bi na Jebesh-Gilead ahuru bụghị iji ndidi n'etiti na agha.
21:9 (N'otu aka ahụ, na oge mgbe ha anọwo na Shaịlo, dịghị otu n'ime ha e hụrụ na-e.)
21:10 Ya mere, ha zipụrụ puku mmadụ iri nnọọ siri ikom, na ha gwara ha, si, "Gaa na-egbu ndị bi na Jebesh-Gilead na ọnu mma-agha, tinyere ndị nwunye ha na ụmụntakịrị. "
21:11 Na a ga-abụ ihe i kwesịrị ime: "Onye ọ bụla nke nwoke, nakwa dị ka ndị inyom niile ndị mara ikom, a ga-egbu. Ma amaghị nwoke ị ga-doputa. "
21:12 Na nnù na-amaghị nwoke, ndị na-amaghị ihe ndina nke a nwoke, ahuru si Jebesh-Gilead. Ha we me ka ha mara ụlọikwuu na Shaịlo, na n'ala Kenean.
21:13 Na ha zigaara ụmụ Benjamin, bụ ndị na nkume nke na Rimon, na ha gwara ha, nke mere na ha ga-enweta ha na udo.
21:14 Ụmụ Benjamin wee, n'oge ahụ, na nwunye e nyere ha si n'etiti ndị inyom Jebesh-Gilead. Ma ndị ọzọ nọ ahụghị, onye ha nwere ike ime ihe a yiri n'ụzọ.
21:15 Na niile nke Israel nọ na wutere, na ha mere penance maka ebibi otu ebo nke Israel.
21:16 Na ndị ukwuu site ọmụmụ kwuru: "Gịnị ka anyị ga-eme na ndị fọdụrụnụ, ndị na-natara nwunye? N'ihi na ihe niile na nwanyị nke Benjamin e gbuturu,
21:17 na anyị ga na-oke-elekọta, na-eme ka ndokwa na a nnọọ ukwuu mbo, nke mere na onye ebo wee ghara ihichapụ n'ebe Israel.
21:18 Ma anyị onwe anyị ndinyom, anyị na-adịghị ike na-enye ha, a na-agbụ iyi na ihe-nkọcha, mgbe anyị kwuru, Ọnụ bụ ya ga-enye ọ bụla ụmụ ya ndị inyom na Benjamin ka a nwunye. "
21:19 Ha we were ndụmọdụ, ha we si, "Lee, e nwere a kwa afọ ememe nke Jehova na Shailo, nke na nsogbu n'ebe ugwu nke obodo nke Bethel, na n'akụkụ ọwụwa anyanwụ nke ụzọ na onye na-ewe si Betel Shechem, na ndịda nke obodo nke Lebona. "
21:20 Ha gwara ụmụ Benjamin, ha we si: "Gaa, ma zoo n'ubi vaịn.
21:21 Mgbe ị ga-hụrụ inyom Shaịlo-edukwa edu apụta ite egwú, dị ka omenala, -aga na mberede si ubi-vine, na ka onye ọ bụla ẹkemụm otu nwunye si n'etiti ha, na njem n'ala Benjamin.
21:22 Na mgbe nna nna ha na ụmụnna na-abata, ha na-amalite na-eme mkpesa megide unu na-arụ ụka, anyị ga-asịkwa ha: 'Were ebere n'aru ha. N'ihi na ha na-jide ha site na nri nke agha ma ọ bụ mmeri. Kama, na-arịọ na-enweta ha, ị enyeghị ha, na otú ahụ ka mmehie na gị. ' "
21:23 Na umu-ndikom Benjamin mere nnọọ dị ka ha nọworo na iwu. Si dị nakwa dị ka ọnụ ọgụgụ ha, ha jidere onwe ha otu nwunye ọ bụla, nke ndị na-ada si ịgba egwú. Ha we ba ha nketa, na ha wuru obodo-ha, na ha bi ha.
21:24 Ụmụ Izrel na-laghachi, dị ka ebo ha na ezinụlọ, n'ụlọikwuu ha. N'ụbọchị ndị, e nweghị eze n'Izrel. Kama, onye ọ bụla mere ihe ziri ezi n'anya ya onwe ya.